စွဲလမ်းနေသည့်အာရုံကြောဆားကစ်၏ဒိုင်းနမစ် - ဆု၊ ဆန့်ကျင်မှုနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုမှတ်ဉာဏ် (၂၀၀၉) - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်ရှိ Porn
Pharmacopsychiatry ။ စာရေးသူလက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်; PMC စက်တင်ဘာ 8, 2009 အတွက်ရရှိနိုင်ပါ။
Pharmacopsychiatry ။ 2009 နိုင်ပါစေ; 42 (ပျော့ပျောင်း 1): S32-S41 ။
မေလ 11, 2009 အွန်လိုင်းထုတ်ဝေသည်။ Doi: 10.1055 / s ကို-0029-1216356
မူးယစ်ဆေးစွဲဦးနှောက် hedonic စနစ်များသိသိသာသာ dysregulation နှင့်အတူမူးယစ်ဆေးဝါး compulsive အသုံးပြုမှု relapsing, နာတာရှည်အဖြစ် conceptualized ဖြစ်ပါတယ်။ compulsive မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုမူးယစ်ဆေးအပြုသဘောအားကောင်းနှင့်စိတ်ခွန်အားနိုးဆုတ်ခွာ၏အနုတ်လက္ခဏာအားဖြည့်ဖြန်ဖြေဦးနှောက်အလွှာ၏စုဆောင်းမှုအဘို့အဦးနှောက်အလွှာ၏လျော့နည်းသွား function ကိုဖြင့်လိုက်ပါသွားသည်။ စိတ်ခွန်အားနိုးဆုတ်ခွာ (စွဲလမ်း၏ "မှောင်မိုက်ဘက်") များအတွက်အာရုံကြောအလွှာ corticotropin-releasing အချက်နှင့် norepinephrine အပါအဝင်တိုးချဲ့ amygdala ၏ဒြပ်စင်များနှင့်ဦးနှောက်ကိုဖိစီးမှုစနစ်များစုဆောင်းမှု, ပါဝငျသညျ။ လျော့နည်းသွားဆုလာဘ် function ကိုနှင့်အတူပေါင်းစပ်ဤအပြောင်းအလဲများ, relapse များအတွက်အစွမ်းထက်စိတ်ခွန်အားနိုးနောက်ခံဖြစ်ပေါ်လာသောတစ်ခု allostatic ပြည်နယ်၏ပုံစံအတွက်ဇွဲရှိရှိတွေးဆနေကြပါတယ်။ Relapse လည်းယခင်ကမူးယစ်ဆေးဝါးရှာနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးစိတ်ခွန်အားနိုးရုပ်သိမ်းရေးနှင့်အတူတွဲလှုံ့ဆော်မှုများ၏စိတ်ခွန်အားနိုးသက်ရောက်မှုဖြန်ဖြေအတွက် basolateral amygdala များအတွက် key ကိုအခန်းကဏ္ဍကပါဝင်ပတ်သက်။ အဆိုပါ basolateral amygdala ယေဘုယျအားဖြင့်စိတ်ခံစားမှုအမှတ်တရများဖြန်ဖြေအတွက်သော့ချက်အခန်းကဏ္ဍရှိပါတယ်။ အဆိုပါအယူအဆဒီနေရာမှာစောဒကတက်မူးယစ်ဆေးဆုတ်ခွာများ၏စိတ်ခွန်အားနိုးအကျိုးဆက်များအားဖြင့် activated ဦးနှောက်စိတ်ဖိစီးမှုစနစ်များကိုမူးယစ်ဆေးရှာမောင်းကြောင့်အနုတ်လက္ခဏာအားဖြည့်များအတွက်အခြေခံဖွဲ့စည်း, ဒါပေမယ့်လည်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြည်နယ်ရှည်ကြောင်းဝန်ထမ်းတွေရဲ့ယန္တရားများ potentiate နှင့်စွဲလမ်း၏ allostatic ပြည်နယ်မောင်းကိုကူညီနိုင်မသာသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။
ထို့အပြင်ပစ္စည်းဥစ္စာမှီခိုအဖြစ်လူသိများမူးယစ်ဆေးစွဲသည်, စားသုံးမှုကန့်သတ်အတွက်ထိန်းချုပ်မူးယစ်ဆေး, (1) အရှုံးနှင့်အပျက်သဘောဆောင်သောစိတ်ခံစားမှုပြည်နယ် (ဥပမာ၏ (2) ပေါ်ပေါက်ရေးရှာယူမှ (3) မလှူဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာတစ်ခုနာတာရှည် relapsing ရောဂါဖြစ်ပါသည်, dysphoria, စိုးရိမ်စိတ်, စိတ်တိုတာတွေ) ကိုမူးယစ်ဆေးဝင်ရောက်ခွင့်) မှီခိုအဖြစ်ဤနေရာတွင်သတ်မှတ် (တားဆီးသောအခါ။ အပျက်သဘောဆောင်သောစိတ်ခံစားမှုပြည်နယ်ပေါ်ပေါက်ရေးကသတ်မှတ်ထားသောပစ္စည်းမူတည်တစ်ခုထူထောင်စံနှုန်းမဟုတ်ပေမယ့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါ၏ diagnostic နှင့်စာရင်းအင်းလက်စွဲစာအုပ်, 4th ထုတ်ဝေ (DSM-IV ), ဒါကြောင့်စိတ်ခွန်အားနိုးဆုတ်ခွာချေါခဲ့ပြီးသောအရာကိုတစ်ရောင်ပြန်ဟပ်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောကြောင့် [အဆိုပါ DSM-IV နှင့်စွဲလမ်းတဲ့ကျယ်ပြန့်လက္ခဏာအတွက်တဦးတည်းစံတစ်ခုဖြစ်သည်78] ။ ဆေးခန်းတစ်ခုချိုးဖောက်မှုများမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏ရံဖန်ရံခါပေမယ့်ကန့်သတ်အသုံးပြုမှု compulsive မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနှင့်နာတာရှည်မူးယစ်ဆေးစွဲပေါ်ပေါက်ရေးထံမှကွဲပြားသည်။ လက်ရှိ neurobiological သုတေသန၏အရေးပါသောရည်မှန်းချက်ရံဖန်ရံခါ, ထိန်းချုပ်ထားမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုကနေအကူးအပြောင်းနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးရှာခြင်းနှင့်နာတာရှည်စွဲသတ်မှတ်ပါတယ်ကြောင်းမူးယစ်ဆေးဆည်းပူးနေကျော်အမူအကျင့်ထိန်းချုပ်မှုများဆုံးရှုံးမှုဖျန်ဖြေတစ်ခုကိုသတ်သတ်မှတ်မှတ် neurocircuits အတွင်း neuropharmacological နှင့် neuroadaptive ယန္တရားများကိုနားလည်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ မူးယစ်ဆေးစွဲသုံးအဆင့်ဆင့်၏ဖွဲ့စည်းစွဲတစ်ခုပြိုကျသံသရာအတွက် Impulse ထံမှ compulsive မှဖြစ်စဉ်များတဲ့ရောဂါအဖြစ် conceptualized ထားပြီး: အဆက်မပြတ် / မျှော်လင့်, Bing မူးယစ်နှင့်ဆုတ်ခွာ / အနုတ်လက္ခဏာကိုထိခိုက် [41, 44, 45].
စမ်းသပ်နှင့်လူမှုရေးစိတ်ပညာကနေ neurobiology အထိကွဲပြားခြားနားသောသီအိုရီအမြင်များ, တစ်ဦးချင်းစီကတခြားသို့နို့တိုက်ကျွေးမှုကပိုပြင်းထန်သောဖြစ်လာနှင့်အပြုသဘောကနေအပျက်သဘောအားဖြည့်ရန်ရွေ့လျားအဖြစ် conceptualized ထားတဲ့ဤသုံးပါးအဆင့်ဆင့်အပေါ် superimposed နိုင်ပါသည်။ အပြုသဘောအားကောင်းတဲ့လှုံ့ဆော်မှု၏တင်ဆက်မှုတစ်ခုတုံ့ပြန်မှုများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုတိုးပွားစေခြင်း, အနုတ်လက္ခဏာအားဖြည့်မယ့်လှုံ့ဆော်မှုများဖယ်ရှားရေးတစ်တုံ့ပြန်မှုများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုတိုးပွားစေရသောအခြေအနေမျိုးအဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်သည့်အတွက်အခွအေနေအဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ မူးယစ်ဆေးဆည်းပူးနေနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးရှာ၏အပြုသဘောဆောင်သည့်အားဖြည့်ဂုဏ်သတ္တိများဘို့အာရုံကြောအလွှာစွဲ၏ neurobiology ၏လယ်ပြင်ကြီးစိုးခဲ့ကြသည်။ သို့သျောလညျးကိုပိုမကြာသေးမီအလုပ် [abstinence နှင့်အသီးသီးဆုတ်ခွာ / အနုတ်လက္ခဏာဇာတ်စင်နှင့်စွဲသံသရာ၏အဆက်မပြတ် / မျှော်လင့်စင်ပေါ်မှာထိခိုက်စေ၏ပေါ်ထွက်လာသောကြောင့်ရှည်ကြာ abstinence နှင့်အတူဆက်နွယ်နေတဲ့အနုတ်လက္ခဏာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြည်နယ်၏ဖယ်ရှားရေးနှင့်အတူဆက်စပ်အနုတ်လက္ခဏာအားဖြည့်ယန္တရားအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ထားပါတယ်34, 37] ။ အဆိုပါအယူအဆရေးရာမူဘောင်စွဲခြင်းနှင့်အပျက်သဘောဆောင်သောစိတ်ခံစားမှုပြည်နယ်၏ထားတဲ့ပေါ်ပေါက်ရေးအတွက်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုကနေစွဲဖို့အကူးအပြောင်းတခုတခုအပေါ်မှာအလေးထား၏ "စိတ်ခွန်အားနိုး" ရှုထောင့်အပေါ်အခြေခံသည် (ဥပမာ dysphoria, စိုးရိမ်စိတ်, စိတ်တိုတာတွေ; ကို "မှောင်မိုက်ဘက်" ဟုချေါ) လာသောအခါလက်လှမ်းပေါ်ထွက်လာ မူးယစ်ဆေးမှတားဆီးများနှင့်စွဲလမ်းနှင့်၎င်း၏တည်တံ့ခိုင်မြဲရေး၏တည်ထောင်ခြင်းများအတွက် key ကိုစိတ်ခွန်အားနိုးအခြေခံကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။
အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အပြုသဘောဆောင်-အားဖြည့်ဂုဏ်သတ္တိများ (ventral striatal-pallidal-thalamic ကွင်း) နှင့်စုဆောင်းမှုနှင့်အတူဆက်စပ် neurobiological circuitry ၏ dysregulation တွင်ပါဝင်ပတ်သက်သည့် neurobiological circuitry နှစ်ခု neurobiological ဆားကစ်မူးယစ်ဆေးဝါးများကိုရှာကွဖို့လှုံ့ဆျောမှု၏ hedonic ရှုထောင့်မှအဓိကသော့ချက်အဖြစ်အဆိုပြုထားပါသည် အလွဲသုံးစားမှု (တိုးချဲ့ amygdala) ၏မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အနုတ်လက္ခဏာ-အားဖြည့်ဂုဏ်သတ္တိများ၏ (ပုံ 1) ။ ပစ္စုပ္ပန်ပြန်လည်သုံးသပ်, မူးယစ်ဆေးစွဲဖို့ယူပြီးမူးယစ်ဆေးကနေအကူးအပြောင်းနဲ့ဆက်စပ် neurocircuits ၏ plasticity အပေါ်တစ်ဦးအာရုံနှင့်အတူရုပ်သိမ်းရေးနှင့်အလွန်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီး abstinence များ၏စိတ်ခွန်အားနိုးသက်ရောက်မှုများစွဲသံသရာ၏အမျိုးမျိုးသောအဆင့်ဆင့်တွင်ပါဝင်ပတ်သက်သည်ဟုစွဲ၏ neurobiological ယန္တရားများစူးစမ်းနှင့်ဦးမည် အဆိုပါစွဲဖြစ်စဉ်ကိုဆက်ထိန်းကူညီစိတ်ခံစားမှုမှတ်ဉာဏ်နှင့်အတူမျဉ်းပြိုင်။
အဆိုပါစွဲသံသရာ၏အဆင့်သုံးဆင့်ဤအဆင့်အာရုံစိုက်ကုသမှုများအတွက်အသုံးပြုသည်လက်ရှိတွင်သောမူးယစ်ဆေးဝါးများ, ဤအဆင့်မှသက်ဆိုင်ရာဤသုံးသပ်ချက်ကိုအတွက်ဖော်ထုတ်သည့်ပစ်မှတ်နှင့်ဆက်စပ်အာရုံကြော circuitry ။ Bing / မူးယစ် ဇာတ်စင်: အားဖြည့် ...
အလွဲသုံးမှုများမူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်အတူ Dysregulated ကြောင်းအပြုသဘောအားကောင်း၏ Neurocircuitry
တစ်ဦးကဦးနှောက်ကိုဆုလာဘ်စနစ်ကရှည်လျား [လျှပ်စစ်ဦးနှောက်ဆွဆုလာဘ်သို့မဟုတ် intracranial Self-stimulation ၏ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုကတည်းကတွေးဆထားသည်64] နှငျ့တိရစ်ဆာနျမြားကိုမှီခိုနေတဲ့သမိုင်းမရှိဘဲမူးယစ်ဆေးဝါးများ Self-စီမံခန့်ခွဲကြလိမ့်မည်သောရှာဖွေတွေ့ရှိမှု  ။ ဦးနှောက်ဆွဆုလာဘ်ဦးနှောက်အတွက်ကျယ်ပြန့် neurocircuitry ကပါဝင်ပတ်သက်, ဒါပေမယ့်နိမ့်ဆုံးဆုလာဘ်တံခါးအားဖြင့်သတ်မှတ်ပါတယ်အရှိဆုံးအထိခိုက်မခံဆိုဒ်များ [သည့် Basal forebrain အတူ ventral tegmental ဧရိယာဆက်သွယ်ထားသော medial forebrain ဆော့ဝဲအစုအဝေး၏လမ်းကြောင်းပါဝင်ပတ်သက်နေ64] ။ အများကြီးအလေးပေးသည့် medial forebrain ဆော့ဝဲအစုအဝေးအတွက်ကွှ monoamine စနစ်များ၏အခန်းကဏ္ဍအပေါ်ပိုင်းတွင်အာရုံစူးစိုက်ခဲ့သော်လည်း, ထို medial forebrain ဆော့ဝဲအစုအဝေးမှာရှိတဲ့တခြား nondopaminergic စနစ်များကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်း [အဓိကအခန်းကဏ္ဍများ27] ။ အဆိုပါတွေးဆဆုလာဘ်စနစ်ဖြင့်အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အပြန်အလှန်အလွဲသုံးစားမှုအားလုံးမူးယစ်ဆေးစူးရှသောအုပ်ချုပ်ခွင့်ရသောအခါ, ဦးနှောက်ဆွဆုလာဘ်တံခါးလျော့သောလေ့လာရေးနေဖြင့်အလေးပေးပြောကြားခဲ့သည်ခဲ့သည် .
အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏စူးရှသောအားဖြည့်သက်ရောက်မှု dopamine, serotonin, opioid peptides နှင့်γ-aminobutyric အက်ဆစ် (ဂါဘမြို့သား) စနစ်များ၏ activation အသုံးပြုပုံဖြစ်စေသည့် Basal forebrain (အထူးသနျူကလိယ accumbens နှင့် amygdala ၏ဗဟိုနျူကလိယထဲမှာတိုက်ရိုက်လုပ်ရပ်များကကမကထပြုခဲ့ကြသည် ) သို့မဟုတ် ventral tegmental ဧရိယာ၌သွယ်ဝိုက်လုပ်ရပ်များအားဖြင့် [32, 35, 42, 61] ။ အများကြီးအထောက်အထား mesolimbic dopamine စနစ်ကသိသိသာသာန့်အသတ်-access ကို Self-အုပ်ချုပ်မှုကာလအတွင်း psychostimulant မူးယစ်ဆေးဝါးများအားဖြင့် activated သောအယူအဆထောက်ခံပါတယ်။ နျူကလီးယပ် accumbens အတွက်အလွဲသုံးစားမှုတိုး extracellular dopamine အဆင့်ဆင့်၌ရှိသမျှသောမူးယစ်ဆေးထိုးဖြင့်တိုင်းတာပေမယ့် Vivo အတွက် microdialysis  တစ်ဦးတိုး၏သိသိသာသာလျော့နည်း Self-အုပ်ချုပ်မှုကာလအတွင်းနျူကလိယအီသနောအဘို့အ accumbens, နီကိုတင်းနှင့် opioids ထဲတွင်ဖြစ်ပေါ် [15, 97] ။ ထို့အပြင် opioid နှင့်အီသနော Self-အုပ်ချုပ်မှု [သည့် mesolimbic dopamine စနစ်၏ရွေးချယ်ပျက်စီးခြင်းအနေဖြင့်ထိခိုက်များမှာ16, 60, 66, 69] ။ serotonin စနစ်များ, serotonin 5-HT ပါဝင်သောအထူးသဖြင့်သူတို့အား1B နျူကလီးယပ် accumbens အတွက်အဲဒီ receptor ကို Activation လည်း psychostimulant မူးယစ်ဆေးဆိုးကျိုးများအားဖြည့်သည့်လူတန်းစားအတွက်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရပြီ။ အဆိုပါ ventral striatum, ventral tegmental ဧရိယာနှင့် amygdala အတွက် Opioid peptide receptors အကြီးအကျယ် opioid ရန်များ၏သက်ရောက်မှုများအပေါ်အခြေခံပြီး opioid နှင့်အီသနော Self-အုပ်ချုပ်ရေးသက်ရောက်မှုအားဖြည့်လူတန်းစားပြေလည်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးရန်တွေးဆခဲ့ကြသည်။ နျူကလီးယပ် accumbens နှင့် amygdala ၏ဗဟိုနျူကလိယသို့ထိုးသွင်း Opioid ရန် [opioid နှင့်အီသနော Self-အုပ်ချုပ်ရေးပိတ်ဆို့ခြင်းအတွက်အထူးသဖြင့်ထိရောက်သောများမှာ28, 92] ။ GABAergic စနစ်များ [(ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအဘို့အတွေ့ဆေးများ intoxicating မှာအီသနောတို့ကအကျူးများနှင့် postsynaptically အဆိုပါ amygdala အတွက် activated, နှင့် amygdala ပိတ်ပင်တားဆီးမှုအီသနော Self-အုပ်ချုပ်ရေးသို့ထိုးသွင်းဂါဘမြို့သားရန်နေကြတယ်35, 61]) ။
မူးယစ်ဆေးဆုတ်ခွာ၏အနုတ်လက္ခဏာစိတ်ခွန်အားနိုးသက်ရောက်မှုများအတွက်အာရုံကြောအလွှာများနှင့် neuropharmacological ယန္တရားများအလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အပြုသဘောဆောင်အားဖြည့်ဆိုးကျိုးများအတွက်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရအတူတူ neurochemical စနစ်များနှင့် neurocircuits ၏နှောင့်အယှက်ပါဝင်စေခြင်းငှါ, တစ်ဦးအတွင်း-system ကို neuroadaptation ချေါ။ စူးရှသောဆုတ်ခွာစဉ်ကဦးနှောက်ကိုဆုလာဘ်တံခါးခုံအတွင်းအလွဲသုံးစားမှုအသီးအနှံဓာတ်လှေကားအားလုံးမူးယစ်ဆေး  နှင့်စွဲဖို့အကူးအပြောင်း၏တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များအတွက်ဦးနှောက်ဆုလာဘ်တံခါးခုံအတွင်းတိုး (ဆိုလိုသည်မှာဆုလာဘ်လျော့နည်းသွား) ယာယီအရင်အဦးနေရာနှင့်အလွန်အမင်းတိုးချဲ့ဝင်ရောက်ခွင့်နှင့်အတူမူးယစ်ဆေးစားသုံးမှုအတွက်တိုးနှင့်အတူပတျသကျ [1, 31] (ပုံ 2).
(Aintracranial Self-stimulation (ICSS) ဆုလာဘ်တံခါးများနှင့်ကင်းစားသုံးမှုတင်းမာမှုအတွက်မြင့်တက်ကြား) ဆက်ဆံရေး။ (လက်ဝဲအခြေခံ ICSS တံခါးမှ) ရာခိုင်နှုန်းပြောင်းလဲမှု။ (မှန်သောတစ်ဦးချင်းစီ၏ပထမတစ်နာရီကာလအတွင်းရရှိခဲ့ကင်းထိုး၏) နံပါတ် ...
ထိုကဲ့သို့သောစူးရှဆုတ်ခွာအတွင်း mesocorticolimbic dopamine စနစ်၏လှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပေါ်လျော့နည်းသွား, အဖြစ်နျူကလိယ accumbens နှင့် amygdala အတွက် opioid peptide, ဂါဘမြို့သားများနှင့်အချိုမှုစနစ်များအတွက်အလုပ်လုပ်တဲ့လှုပ်ရှားမှုလျော့သွားသည်။ psychostimulants ၏ထပ်ခါတစ်လဲလဲအုပ်ချုပ်မှု [နျူကလီးယပ် accumbens အတွက် dopamine နဲ့အချိုမှု neurotransmission ၏ကနဦးပံ့ပိုးထုတ်လုပ်91, 96] ။ သို့သော်နာတာရှည်အုပ်ချုပ်မှု [စူးရှဆုတ်ခွာစဉ်အတွင်းနျူကလိယ accumbens အတွက် dopaminergic နှင့် glutamatergic neurotransmission အတွက်လျော့ကျစေပါတယ်29, 97] opioid ဆုတ်ခွာစဉ်အတွင်းနျူကလိယ accumbens အတွက် opioid အဲဒီ receptor transduction ယန္တရားများ၏ဆန့်ကျင်ဘက်တုံ့ပြန်မှု  အရက်ဆုတ်ခွာစဉ်အတွင်း GABAergic neurotransmission ပြောင်းလဲမှုများ [25, 71] နှင့်နီကိုတင်းဆုတ်ခွာစဉ်ကနီကိုတင်း acetylcholine အဲဒီ receptor function ကိုအတွက်ဒေသဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများကို differential ။
ဆုတ်ခွာသို့မဟုတ်ပေါ်ထွက်လာသောကြောင့်ရှည်ကြာ abstinence စဉ်အတွင်းစွဲလူ့ပုံရိပ်လေ့လာမှုများတိရိစ္ဆာန်လေ့လာမှုများနှင့်အတူတသမတ်တည်းဖြစ်ကြောင်းရလဒ်များကိုထောက်ပံ့ပေးခဲ့ကြသည်။ Dopamine: D2 [receptors (hypodopaminergic လုပ်ငန်းဆောင်တာကိုထင်ဟပ်ဖို့တွေးဆ) လျှော့လျက်, orbitofrontal-infralimbic cortex စနစ်၏ hypoactivity ဖြစ်ပေါ်95] ။ ဆုလာဘ် neurotransmitter function ကိုအတွက်လျော့ကျစူးရှသောမူးယစ်ဆေး abstinence နှင့်အတူဆက်စပ်အနုတ်လက္ခဏာစိတ်ခွန်အားနိုးပြည်နယ်မှသိသိသာသာအထောက်အကူမှတွေးဆခဲ့ကြပြီးပေါ်ထွက်လာသောကြောင့်ရှည်ကြာ abstinence နှင့်ပြန်သွားကြသည်မှအားနည်းချက်များ၏လက်တွေ့ syndrome ရောဂါအထောက်အကူပြုကြောင်းရေရှည်ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြောင်းလဲမှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
အလွဲသုံးမှုများမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏နာတာရှည်အသုံးပြုမှုနှင့်အတူအပျက်သဘောဆောင်သောစစ်ကူ Associated ၏ Neurocircuitry
စွဲလမ်း၏အမှောင်ဘက်ခြမ်း  ဆန္ဒရှိပြည်နယ်များမောင်းထုတ်ကြောင်း antireward စနစ်များစုဆောင်းမှုထံမှရယူထားခြင်းကြောင့်စိတ်ခွန်အားနိုးစနစ်များကိုဖြန်ဖြေအာရုံကြောဆားကစ်၏လှုပ်ရှားမှုအတွက်ရေရှည်, မြဲ plasticity ပါဝင်မှတွေးဆခဲ့သည်။ အထက်သတ်မှတ်ဆုတ်ခွာ / အနုတ်လက္ခဏာကိုထိခိုက်ဇာတ်စင်ထိုကဲ့သို့သောနာတာရှည်ယားယံခြင်း, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနာကျင်မှု, အကျပ်အတည်းများကြောင့်သာဖြစ်လေသည်, dysphoria, alexithymia, နှင့်သဘာဆုလာဘ်များအတွက်လှုံ့ဆျောမှု၏အရှုံးအဖြစ် key ကိုစိတ်ခွန်အားနိုးဒြပ်စင်ပါဝင်ပါသည်အပေါင်းတို့နှင့်တကွ, ကနေဆုတ်ခွာစဉ်အတွင်းဆုလာဘ်တံခါးခုံအတွင်းတိုးခြင်းဖြင့်တိရိစ္ဆာန်များအတွက်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ပါသည် အလွဲသုံးစားမှုအဓိကမူးယစ်ဆေးဝါးများ။ Antireward [ဦးနှောက်စနစ်များကိုဆုလာဘ်ကန့်သတ်နိုင်ဖို့ရာအရပျ၌ရှိကြ၏သောအယူအဆပေါ်တွင်အခြေခံတဲ့အယူအဆဖြစ်ပါတယ်41, 45].
အဆိုပါ neuroanatomical entity အဆိုပါတိုးချဲ့ amygdala antireward အဖြစ်သတ်မှတ်ဆုလာဘ် function ကိုအပေါ်အပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုများများအတွက် neuroanatomical အလွှာကိုယ်စားပြုစခွေငျးငှါချေါ။ အဆိုပါတိုးချဲ့ amygdala အဆိုပါ stria terminalis ၏အိပ်ရာနျူကလိယက, amygdala ၏ဗဟိုနျူကလိယ, နှင့်နျူကလိယ accumbens (အနျူကလိယ accumbens ၏ shell ကို) ၏ medial မဟာမဲခေါင်ဒေသတွင်းတစ်ဦးအကူးအပြောင်းဇုန်ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်တယ်။ ဤအဒေသများတစ်ခုချင်းစီကိုအချို့ cytoarchitectural နှင့် circuitry တူညီပါတယ်။ အဆိုပါတိုးချဲ့ amygdala ၏ဗဟိုဌာနခွဲဖြစ်သော basolateral amygdala နှင့် hippocampus အဖြစ် limbic အဆောက်အဦကနေမြောက်မြားစွာ afferents အားလက်ခံတွေ့ဆုံ, နှင့် ventral pallidum ၏ medial အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုနှင့်နှစ်ဦးနှစ်ဖက် hypothalamus မှ efferents ပို့ပေးဤသို့နောက်ထပ် (ဂန္ limbic interface သောသတ်သတ်မှတ်မှတ်ဦးနှောက်ဒေသများ defining အဆိုပါ extrapyramidal မော်တာစနစ်ဖြင့်စိတ်ခံစားမှု) အဆောက်အဦများ .
antireward များအတွက် neurochemical အခြေခံများကိုကွောငျးတိုးချဲ့ amygdala အတွင်း neurochemical စနစ်များ [ကျယ်ပြန့်ဖြစ်ခြင်းနှင့် hedonic homeostasis ထိန်းသိမ်းဘို့ရှုပ်ထွေးပြီး buffered system ကိုထင်ဟပ်စေခြင်းငှါ41] ။ သို့သော် antireward neurotransmitter စနစ်များများအတွက် neurochemical Focal Point သည်အချက် (CRF), norepinephrine နှင့် dynorphin-releasing corticotropin နေကြသည်။ CRF, norepinephrine နှင့် dynorphin [ဆုတ်ခွာစဉ်အတွင်းဆန္ဒရှိသို့မဟုတ်စိတ်ဖိစီးမှုကဲ့သို့ပြည်နယ်များကိုထုတ်လုပ်နာတာရှည်မူးယစ်ဆေးထိတွေ့နေစဉ်အတွင်းစုဆောင်းနေကြသည်36, 45].
စိတ်ဖိစီးမှုမော်ဂျူတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ကွဲပြားခြားနားသော neurochemical စနစ်များလည်းထင်သည်တုန်လှုပ်မှုတည်းမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏နာတာရှည်ရှိနေခြင်းကိုကျော်လွှားရန်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါး-ချေါတစ်ဦးအကြား-system ကို neuroadaptation ၏ရှေ့မှောက်တွင်ရှိနေသော်လည်းပုံမှန် function ကို restore လုပ်ဖို့ကြိုးစားမှုတစ်ခုအတွက်ဦးနှောက်ကဖိစီးမှုစနစ်များ၏ neurocircuitry အတွင်းစေ့စပ်နိုင်ပါသည်။ အဆိုပါ hypothalamic-pituitary-adrenal ဝင်ရိုးများနှင့်ဦးနှောက်ကိုဖိစီးစနစ်, CRF ကကမကထပြုခဲ့နှစ်ဦးစလုံး, မြင့်မားသော adrenocorticotropic ဟော်မုန်းနှင့် corticosterone တစ်ဘုံတုံ့ပြန်မှုနှင့်အတူအလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးနာတာရှည်အုပ်ချုပ်မှုအားဖြင့် dysregulated နှင့်အပေါငျးတို့သအဓိကမူးယစ်ဆေးထံမှစူးရှဆုတ်ခွာစဉ်အတွင်း CRF amygdala တိုးချဲ့နေကြသည် အလွဲသုံးစားမှု [43, 48] ။ အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများကနေ acute ရုပ်သိမ်းရေးကိုလည်း [သည့် stria terminalis ၏အိပ်ရာနျူကလိယအတွက် norepinephrine များလွှတ်ပေးရန်တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့် amygdala အတွက် neuropeptide Y ကို (NPY) ၏အလုပ်လုပ်တဲ့အဆင့်ဆင့်လျော့ချစေခြင်းငှါ65, 77].
ဥပမာအားဖြင့်, အရက်အတူ CRF, အ neuroendocrine ဖြန်ဖြေအတွက်သော့ချက်အခန်းကဏ္ဍရှိကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရနှင့်မှီခိုနေစဉ်အတွင်းအလွန်အကျွံသောက်သုံးမောင်းကြောင့်စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်စိုးရိမ်သောကမှအမူအကျင့်တုံ့ပြန်မှုဖြစ်နိုင်သည်  ။ (ထို amygdala ၏ဗဟိုနျူကလိယတို့အပါအဝင်) ကိုတိုးချဲ့ amygdala ၏နေရာများမြင့်မားတဲ့ပမာဏ CRF ဆိပ်ကမ်း, ဆဲလ်အသေကောင်များနှင့် receptors ဆံ့နှငျ့ "extrahypothalamic" CRF-စိတ်ဖိစီးမှု system ကို [၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပါဝင်57] ။ မြောက်မြားစွာလေ့လာမှုများ [ကြောက်ရွံ့စိုးရိမ်စိတ်တွေနဲ့ဆက်စပ်အပြုအမူတုံ့ပြန်မှုဖြန်ဖြေအတွက်တိုးချဲ့ amygdala CRF စနစ်၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုသရုပ်ပြပါပြီ40] ။ အီသနောဆုတ်ခွာစဉ်အတွင်း extrahypothalamic CRF စနစ်များ [မှီခိုကြွက်များ၏ stria terminalis ၏ amygdala နှင့်အိပ်ရာနျူကလိယ၏ဗဟိုနျူကလိယအတွင်း extracellular CRF တစ်ခုတိုးလာသဖြင့်, hyperactive ဖြစ်လာ19, 58, 65, 99] နှင့်ဦးနှောက် CRF စနစ်များသည်ဤ dysregulation အီသနောရုပ်သိမ်းရေးနှင့်အတူဆက်စပ်တိုးမြှင့်စိုးရိမ်စိတ်ကဲ့သို့သောအပြုအမူများနှင့်မြှင့်တင်ရန်အီသနော Self-အုပ်ချုပ်ရေးနှစ်ဦးစလုံးအခြေခံမှတွေးဆသည်။ ဒီအယူအဆ supporting, အမျိုးကွဲ nonselective CRF အဲဒီ receptor ရန်α-helical CRF9-41 နှင့် D-ဖီ CRF12-41 (intracerebroventricular အုပ်ချုပ်ရေး) [မှီခိုတိရိစ္ဆာန်များအတွက်အီသနောဆုတ်ခွာ-သွေးဆောင်စိုးရိမ်စိတ်ကဲ့သို့သောအပြုအမူနှင့်အီသနော Self-အုပ်ချုပ်ရေးနှစ်ဦးစလုံးကိုလျော့ချ5, 93] ။ CRF အဲဒီ receptor ရန်လည်း [စိုးရိမ်စိတ်ကဲ့သို့သောအပြုအမူ attenuate68] အဖြစ်အီသနော-မှီခိုကြွက်များတွင်အီသနော Self-အုပ်ချုပ်မှု  ။ CRF ၏ system administrator1 ရန် [စူးရှရုပ်သိမ်းရေးနှင့်အလွန်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီး abstinence စဉ်အတွင်းစူးရှနှင့်ပေါ်ထွက်လာသောကြောင့်ရှည်ကြာ abstinence နှင့်အီသနော Self-အုပ်ချုပ်ရေးအပေါ်ဆက်နွယ်စိုးရိမ်စိတ်ကဲ့သို့တုံ့ပြန်မှုအပေါ်အလားတူလုပ်ရပ်များရှိ36] ။ ဤရွေ့ကား data တွေကိုမှီခိုနှင့်အတူဆက်စပ်တိုးမြှင့် Self-အုပ်ချုပ်ရေးဖြန်ဖြေအတွက်အဓိက amygdala ၏ဗဟိုနျူကလိယအတွင်း CRF များအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍ, အကြံပြုအပ်ပါသည်။ အလားတူရလဒ်များသည်ဘိန်းဖြူထပ်တိုးခွင့်နှင့်ဆက်နွယ်တိုးမြှင့်သွေးကြောသွင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်အတူကြည့်ရှုလေ့လာခဲ့ကြ  ကင်း  နှင့်နီကိုတင်း .
ဤရလဒ်သည်ထိုကဲ့သို့သော dopamine, opioid peptides, serotonin, နှင့်ဂါဘမြို့သား function ကိုအတွက်လျော့နည်းစေ, ဒါပေမယ့်လည်း CRF စနစ်၏စုဆောင်းမှုအဖြစ်မှီခို၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုနေစဉ်အတွင်းအလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဆိုးကျိုးများအားဖြည့်သည့်လူတန်းစားနှင့်ဆက်စပ် neurotransmitters ရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်ထဲမှာမသာပြောင်းလဲမှု, အကြံပြု (ပုံ 3) ။ စိတ်ခွန်အားနိုးရုပ်သိမ်းရေးနှင့်ဆက်စပ်အပိုဆောင်းအကြား-system ကို neuroadaptations [သည့် dynorphin / κ opioid စနစ်, norepinephrine ဦးနှောက်စိတ်ဖိစီးမှုစနစ်၏ activation, နှင့် NPY ဦးနှောက် antistress စနစ်၏ dysregulation ၏ activation ပါဝင်သည်43] ။ ထို့အပြင်ဦးနှောက်စိတ်ဖိစီးမှုစနစ်များကို Activation စူးရှ abstinence နှင့်အတူဆက်စပ်အနုတ်လက္ခဏာစိတ်ခွန်အားနိုးပြည်နယ်မှ, ဒါပေမယ့်လည်းလူသားတွေအတွက်အလွန်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီး abstinence စဉ်အတွင်းလေ့လာတွေ့ရှိဖိအားအားနည်းချက်မှသာအထောက်အကူဖြစ်စေလိမ့်မည်။ စုစုပေါင်းကဤ neurochemical လေ့လာမှုများ (စွဲ neurobiology ထံမှ) နှင့် neuroanatomical လေ့လာမှုများ (အမူအကျင့်မှ neuroscience ထံမှ) သည်နှင့်ဆက်စပ်သောစိတ်ခံစားမှုလှုံ့ဆော်မှုများ၏ပေါင်းစည်းမှုများအတွက်ကြွယ်ဝသောအလွှာထောက်ပြ "စွဲလမ်း၏မှောင်မိုက်ဘက်ပါ" ဟုမောင်းသောဆန္ဒရှိစိတ်ခံစားမှုပြည်နယ်များ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာအဖြစ်သတ်မှတ် စွဲလမ်း၏အနုတ်လက္ခဏာအားဖြည့်။
စွဲလမ်းနှင့် Antireward: ကြောက်လန့်ခြင်းနှင့်နာကျင်မှု
အဆိုပါတိုးချဲ့ amygdala နှင့်စိတ်ခံစားမှုပြည်နယ်များများ၏ပေါင်းစည်းမှုများအတွက်နောက်ထပ်ဆွဲဆောင်မှုအငြင်းအခုံ [သည့် amygdala ၏ဗဟိုနျူကလိယထဲတွင် Conditions ကိုကွောကျရှံ့တုန့်ပြန်၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးတစ် convergence ပြသတော်မူသောသူသည် Le Doux နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များအနေဖြင့်ကျယ်ပြန့်ဒေတာ, ကနေကြွလာ50] ။ ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်အေးစက်၏ neurocircuitry အပေါ်လေ့လာရေး [သည့် somatosensory cortex ကနေအာရုံ cortex နဲ့နာကျင်မှုထဲကနေအာရုံလှုံ့ဆော်မှုထို့နောက် Conditions ကိုကွောကျရှံ့ဖို့အမျိုးမျိုးသောကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရနှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုထုတ်ယူဖို့ amygdala ၏ဗဟိုနျူကလိယမှမှန်းချက်ရဲ့သောနှစ်ဦးနှစ်ဖက် amygdala ပေါ်တွင်ဆုံကြောင်းပြသ50] ။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင် ပို. ပင်စိတ်ဝင်စားဖွယ်အဆိုပါယူဆချက် [သည့် amygdala ၏ဗဟိုနျူကလိယစိတ်ခံစားမှုနာကျင်မှုအပြောင်းအလဲနဲ့မှာပါဝင်နေတဲ့ neurocircuitry ၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်67] ။ အဆိုပါ amygdala ၏ဗဟိုနျူကလိယဖို့ mesencephalic parabrachial ဧရိယာဖို့ dorsal ဦးချိုထံမှမှန်းချက်ရဲ့သော spino (trigemino) -ponto-amygdaloid လမ်းကြောင်း [စိတ်ခံစားမှုနာကျင်မှုအပြောင်းအလဲနဲ့တွင်ပါဝင်ပတ်သက်ခံရဖို့တွေးဆထားသည်7] ။ ဒီမူဘောင်အောက်, နာကျင်မှု nociception ဖျန်ဖြေကြောင်း homeostatic ဦးနှောက်စည်းမျဉ်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အတူတစ်ချိုးကိုကိုယ်စားပြုတယ်။
ပိတ်ပင်တားဆီးမှုနာကျင်မှု opioids နှင့် homeostasis restore ရာအောကျခွအေနမြေား opioid နာကျင်မှုသက်သာပြီး homeostatic hedonic ပြည်နယ်ဖို့ဘာသာရပ်ပြန်လာရသောနာကျင်မှုအခြေအနေများပါလိမ့်မယ်; ထို့ကြောင့်ဤပြိုင်ဘက်ဖြစ်စဉ်များစေ့စပ်ခံရဖို့မလိုအပ်ပါဘူး။ အလွန်အကျွံ opioid အုပ်ချုပ်ခွင့်, ဖြစ်စေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အလွန်အကျွံသုံးစွဲသို့မဟုတ် pharmacokinetic variable တွေကိုများ၏လျှင်မည်သို့ပင်ဆို, ခန္ဓာကိုယ်ပြိုင်ဘက်ဖြစ်စဉ်များ၏ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုနဲ့ထင်သည်တုန်လှုပ်မှုတည်းတုံ့ပြန်ပါလိမ့်မယ်။ opioids မှ Hyperalgesia အဆိုပါ opioid သူ့ဟာသူ homeostasis အတူချိုးထုတ်လုပ်သောဘာသာရပ်များအတွက်ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ Hyperalgesia အဆိုပါ opioid homeostasis restore ပြန်တကယ်တော့အခါပေါ်ပေါက်ဖို့အများကြီးလျော့နည်းဖွယ်ရှိသည်။ homeostasis ပြန်လည်ဖြစ်ထွန်းရန်အမှုစနစ်အတွက်အချိန်မရှိဘဲပြိုင်ဘက်ဖြစ်စဉ်များ၏ထပ်ခါတစ်လဲလဲထိတွေ့ဆက်ဆံမှု hyperalgesia ဒါပေမယ့်လည်းအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဖော်ပြထားတဲ့ allostatic ဖြစ်စဉ်ကိုသာထိတွေ့ဆက်ဆံပါလိမ့်မယ်။ ထိုသို့သောဖြစ်စဉ်များဆေးထိုးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ pharmacokinetic ကိစ္စများ၏နာကျင်မှုလိုအပ် overshoots သည့်အခါတစ်ဦး opioid နှင့်အတူကုသတစ်ခု opioid ၏သိပ်မြင့်မားတဲ့တစ်ထိုးနှင့်အတူကုသခွငျးအားဖွငျ့မဖြစ်၏နှင့် / သို့မဟုတ်တကယ်တော့မျှနာကျင်မှု (Koob gf, Shurman တည်ရှိတော်မူသောတစ်ဘာသာရပ်ကုသစေခြင်းငှါ ဂျေ, Gutstein H ကို, အတည်မပြုရသေးသောရလဒ်များသည်) ။
ရုပ်သိမ်းရေး, အလွန်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီး Abstinence နှင့် Allostasis
စွဲလမ်း၏အနုတ်လက္ခဏာအားဖြည့်မောင်းသောဆန္ဒရှိစိတ်ခံစားမှုပြည်နယ်များ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာ [စွဲ၏ "မှောင်မိုက်ဘက်" အဖြစ်သတ်မှတ်ထားသည်43, 45] နှင့်ကနဦးမူးယစ်ဆေးအကျိုးသက်ရောက်မှု Euphoria ပီတိအခါပြိုင်ဘက်ဖြစ်စဉ်ကိုအဖြစ်လူသိများသည့် hedonic ပြောင်းလဲနေသောများ၏စိတ်ခွန်အားနိုးဆုတ်ခွာအစိတ်အပိုင်းဖြစ်တွေးဆသည်။ အထက်သတ်မှတ်ဆုတ်ခွာ / အနုတ်လက္ခဏာကိုထိခိုက်ဇာတ်စင်ပါဝင်သည်သောအနုတ်လက္ခဏာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြည်နယ်တွေဖြစ်တဲ့နာတာရှည်ယားယံခြင်း, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနာကျင်မှု, အကျပ်အတည်းများကြောင့်သာဖြစ်လေသည်, dysphoria, alexithymia နှင့်လူသားမြားသညျသဘာဝဆုလာဘ်များအတွက်လှုံ့ဆျောမှု၏အရှုံးအဖြစ် key ကိုစိတ်ခွန်အားနိုးဒြပ်စင်ပါဝင်ပါသည်နှင့်တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များတွင်ထင်ဟပ်နေသည် အလွဲသုံးစားမှုအားလုံးအဓိကမူးယစ်ဆေးဝါးများကနေဆုတ်ခွာစဉ်ကစိုးရိမ်ပူပန်မှုကဲ့သို့သောအပြုအမူအတွက်တိုး, dysphoric ကဲ့သို့တုံ့ပြန်မှုများနှင့်ဆုလာဘ်တံခါးဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းနှစ်ခုဖြစ်စဉ်များစိတ်ခွန်အားနိုးဆုတ်ခွာများအတွက် neurobiological အခြေခံဖွဲ့စည်းတွေးဆနေကြပါတယ်: အကျိုးကိုစနစ်များအတွက် function ကိုဆုံးရှုံး (အတွင်း-system ကို neuroadaptation) နှင့်ဦးနှောက်စိတ်ဖိစီးမှုသို့မဟုတ် antireward စနစ်များ (အကြား-system ကို neuroadaptation) ၏စုဆောင်းမှု [38, 41] ။ မှီခိုနှင့်ဆုတ်ခွာဖွံ့ဖြိုးအဖြစ်, ထိုကဲ့သို့သော CRF, norepinephrine နှင့် dynorphin အဖြစ်ဦးနှောက်စိတ်ဖိစီးမှုစနစ်များ [ဆန္ဒရှိသို့မဟုတ်စိတ်ဖိစီးမှုကဲ့သို့ပြည်နယ်များကိုထုတ်လုပ်စုဆောင်းနေကြသည်45] ။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ယင်း ventral striatum-တိုးချဲ့ amygdala များ၏စိတ်ခွန်အားနိုးဆားကစ်အတွင်းမှာဆုလာဘ် function ကိုလျော့နည်းစေပါသည်။ antireward စနစ်များဆုလာဘ် neurotransmitter function ကိုနှင့်စုဆောင်းမှုအတွက်လျှောက်လျော့နည်းများ၏ပေါင်းစပ်မူးယစ်ဆေး-ရှာကြံအပြုအမူများနှင့်စွဲ compulsive ကိုအထောက်အကူပြုရန်ကြောင့်အနုတ်လက္ခဏာအားဖြည့်တဲ့အင်အားကြီးအရင်းအမြစ်ပေးပါသည်။
အဆိုပါခြုံငုံအယူအဆရေးရာဆောင်ပုဒ်ကဒီမှာငြင်းခုံမူးယစ်ဆေးစွဲတိရစ္ဆာန်၏စိတ်ခံစားမှုပြည်နယ်ထိန်းညှိကြောင်း homeostatic ဦးနှောက်စည်းမျဉ်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အတူတစ်ချိုးကိုကိုယ်စားပြုသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ သို့သော်မူးယစ်ဆေးစွဲ homeostasis နဲ့ရိုးရှင်းတဲ့ချိုးကိုကိုယ်စားပြုသောအမြင်စွဲ၏သော့ချက်ဒြပ်စင်နံပါတ်ရှင်းပြဖို့လုံလောက်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ ထိုကဲ့သို့သောမြင့်မားတဲ့သွေးဖိအားကဲ့သို့သောအခြားနာတာရှည်ဇီဝကမ္မမမှန်ဆင်တူမူးယစ်ဆေးစွဲ, အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှပိုဆိုးလာရင်, သိသာပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသြဇာလွှမ်းမိုးမှုမှဘာသာရပ်ဖြစ်တယ်, ပင်လနှင့် detoxification နှင့်နေကြပြီးနှစ်ပေါင်းလျင်မြန်စွာ "re-စွဲ" ခွင့်ပြုမယ့်ကျန်နေတဲ့ neuroadaptive သဲလွန်စထွက်ခွာမည်။ Relapse, ဒါမှမဟုတ် abstinence ၏ကာလကိုအောက်ပါမူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးစားမှုမှပြန်လာ, အရက်အပေါ်ဥစ္စာမှီခို၏နိယာမဝိသေသလက္ခဏာများတစ်ခုဖြစ်သည်။ မှီခို၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု abstinence ၏ကာလကိုအောက်ပါ compulsive အသုံးပြုခြင်းနှင့် relapse များ၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှအကြံပြုထားသည်။
လူ့အရက်သမားမှာတော့အနုတ်လက္ခဏာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြည်နယ်များအားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာနိုင်မြောက်မြားစွာလက္ခဏာတွေရှည်လျားအီသနောထံမှစူးရှသောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုတ်ခွာပြီးနောက်ဆက်လက်တည်ရှိနေခဲ့သည်။ ဤရွေ့ကားလက္ခဏာတွေ, Post-စူးရှရုပ်သိမ်းရေး, သဘောသဘာဝနှင့် subacute အတွက်အကျိုးသက်ရောက်စေပါလိမ့်နှင့်မကြာခဏ relapse အရင်အဦးနေရာလေ့ရှိပါတယ်။ အနုတ်လက္ခဏာထိုကဲ့သို့သောအမျက်ဒေါသ၏ဒြပ်စင်အဖြစ်စိတ်ခံစားမှု, စိတ်ပျက်, ဝမ်းနည်းမှု, စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်း, ဒုစရိုက်ဖြေအပါအဝင်အပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်စေပြည်နယ်များ, [relapse ၏ဦးဆောင်မိုးရွာသွန်းမှုများမှာ53] ။ ဤသည်ပြည်နယ် "ပေါ်ထွက်လာသောကြောင့်ရှည်ကြာ abstinence" ဟုချေါခဲ့ပြီးတသမတ်တည်းဘာသာရပ်များအားဖြင့်မှတ်ချက်ပြုသည်အောက်ပါသုံးပစ္စည်းများနှင့်အတူတစ်ဦး Hamilton ကစီးပွားပျက်ကပ် rating ≥8ပြတဲ့သူလူသားတွေအတွက်သတ်မှတ်ထားပြီး: စိတ်ဓာတ်ခံစားချက်, စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်း, ဒုစရိုက်ဖြေ  ။ ဥပမာအားဖြင့်, ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်းနှင့်တင်းမာမှု [Post-ဆုတ်ခွာ5ရက်သတ္တပတ်အထိဆက်လက်အစီရင်ခံတင်ပြပြီ3] ။ စိုးရိမ်စိတ် [အထိ9လအတွင်းဆက်လက်ပြသထားသည်73] နှင့်စိုးရိမ်သောကများနှင့်စိတ်ကျဝေဒနာ 20 နှစ်ပေါင်း Post-ရုပ်သိမ်းရေးမှတက်ဘို့အရက်သမား၏ 25-2% အထိဇွဲရှိရှိပြသခဲ့ကြသည်။
အရက်မှီခိုနှင့်အတူတိရိစ္ဆာန်အလုပ်ကြိုတင်မှီခိုနောက်တဖန်မှီခိုလုပ်ယခင်ကမှီခိုတိရိစ္ဆာန်များကိုပထမဦးဆုံးအကြိမ်အရက်ကိုလက်ခံရရှိအုပ်စုများထက်ပိုမိုပြင်းထန်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်သိမ်းရေးနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုကဲ့သို့သောလက္ခဏာများပြသကြောင်းဤကဲ့သို့သောက "မှီခိုတံခါးခုံကို" [ကိုလျှော့ချနိုင်သည်ကိုပြတော်မူပြီ6, 8] ။ ဤသည်မှာအရက်အတွေ့အကြုံနှင့်အထူးသဖြင့်မှီခို၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုအရက်မှတုန့်ပြန်အတွက်အတော်လေးအမြဲတမ်းပြောင်းလဲဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနိုငျသောအယူအဆထောက်ခံပါတယ်။ သို့သော် relapse မကြာခဏမှီခို၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုနေစဉ်အတွင်းပေါ်ပေါက်သော neuropharmacological အပြောင်းအလဲများကိုဆုတ်ခွာ ( "အလွန်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးစိတ်ခွန်အားနိုးဆုတ်ခွာ syndrome ရောဂါ") ၏နောက်ဆုံးပေးခြင်းဆိုင်းဘုတ်များ ကျော်လွန်. ဆက်လက်ရှိနိုင်သည်ကိုအကြံပြုစူးရှသောဆုတ်ခွာဆိုင်းဘုတ်များစဲသွားတော့ရှိသည်ဟုပင်ပြီးနောက်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ ထိုသို့သောအလွန်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးဆုတ်ခွာစိတ်ခွန်အားနိုးအရေးပါမှုရှိပါတယ်။ ကြွက်နှင့်ကြွက်များတွင်မှီခို၏သမိုင်းရှည်လျားစူးရှရုပ်သိမ်းရေးနှင့် detoxification ပြီးနောက်နေ့စဉ် 30 မိအစည်းအဝေးများအတွက်အီသနော Self-အုပ်ချုပ်ရေးအတွက်အချိန်ကြာမြင့်စွာမြင့်ထုတ်လုပ်နိုငျ [70, 72] ။ Self-အုပ်ချုပ်ရေးအတွက်တိုးလည်း [ဖိအားတိုးမြှင့်အပြုအမူ Response ဖြင့်လိုက်ပါသွားခြင်းနှင့် CRF အဲဒီ receptor ရန်တုံ့ပြန်တိုးပွါး46] ။ အီသနော Self-အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်ဖိအားကျန်နေတဲ့ sensitivity ကိုတွင်ဤ persistent ပွောငျးလဲမတရားဖမ်းဆီးတစ်ပြည်နယ်အဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ် "ပေါ်ထွက်လာသောကြောင့်ရှည်ကြာ abstinence ။ " စူးရှသောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုတ်ခွာအခြေခံကျော်အီသနောစားသုံးမှုအတွက်တဲ့အခါမှာမြင့်တက်ပျောက်ကွယ်သွားခြင်းနှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာတိုးမြှင့်ထားပါတယ်ပြီးနောက်ကြွက်များတွင်ရှည်လျား abstinence ကာလအထိချဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုမှ response (နာတာရှည်အီသနောထံမှ 2-8 ရက်သတ္တပတ် post-ရုပ်သိမ်းရေး) ဆက်လက်တည်ရှိနေခဲ့သည်။ အလွန်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီး abstinence ကာလအတွင်းမူးယစ်ဆေးဝါး Self-အုပ်ချုပ်ရေးအတွက်မြဲတိုးမူးယစ်ဆေးဆုလာဘ်များအတွက် set ကိုအမှတ်သို့ခြီးမွှောကျကြောင်းဤသို့သော allostatic ကဲ့သို့ညှိနှိုင်းမှု (hedonic သည်းခံစိတ်) ပါဝင်မှတွေးဆထားပြီး  ။ မူးယစ်ဆေးစွဲဤလက္ခဏာများ hedonic function ကိုနှင့်အလုပ်အမှုဆောင် function ကို၏ရိုးရှင်းစွာ homeostatic dysregulation, ဒါပေမယ့်မဟုတ်ဘဲ allostasis ချေါခဲ့ပြီးဤစနစ်များ homeostasis အတူပြောင်းလဲနေသောချိုးထက်ပိုဆိုလို။
Allostasis, မူလက arousal နှင့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ function ကို၏ persistent ရောဂါရှင်းပြဖို့ conceptualized, [ "ပြောင်းလဲမှုကတဆင့်တည်ငြိမ်ရေး" အဖြစ်သတ်မှတ်ပါတယ်86] ။ Allostasis အသစ်တစ်စုံအချက်များဆီသို့အားလုံး parameters တွေကိုလိုအပ်နေခြင်းနှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်ပွနျလညျပွုပွငျပြန်လည်အကဲဖြတ်စဉ်ဆက်မပြတ်အတူမဟုတ်ဘဲ homeostasis ၏အနုတ်လက္ခဏာတုံ့ပြန်ချက်ယန္တရားများထက် feed ကို-ရှေ့ဆက်ယန္တရားပါဝငျသညျ။ လုံလောက်သောအချိန်သို့မဟုတ်အရင်းအမြစ်များကိုတုန့်ပြန် (ဥပမာ, ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်သော Basal forebrain အတွက် CRF, norepinephrine နှင့် dynorphin အကြားအပြန်အလှန်ပိတ်ထားဖို့ကိုမရရှိနိုင်လျှင်ထို့ကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုများမှလျင်မြန်စွာတုံ့ပြန်မှုခွင့်ပြုသောအလွန်ဇီဝကမ္မယန္တရားရောဂါဗေဒ၏အင်ဂျင်ဖြစ်လာ [ရောဂါဗေဒစိုးရိမ်စိတ်နှင့် dysphoria) မှ33] ။ Allostatic ယန္တရားများလည်း [စွဲ၏ရောဂါဗေဒအဘို့အဆက်စပ်မှုရှိပါတယ်တဲ့ functioning ဦးနှောက်စိတ်ခံစားမှု system ကိုထိန်းသိမ်းခြင်းတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ခံရဖို့တွေးဆခဲ့ကြ42] ။ စွဲလမ်းနှင့်ဆက်စပ်နေသည့်အနုတ်လက္ခဏာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြည်နယ်များအတွက်အကောင့်မှတွေးဆကြသည်နှစ်ခုအစိတ်အပိုင်းများကိုဦးနှောက်ဆုလာဘ်က transmitter နှင့်ဆားကစ်၏ function ကိုယုတ်လျော့ခြင်းနှင့်ဦးနှောက် antireward သို့မဟုတ်စိတ်ဖိစီးမှုစနစ်များ (၏စုဆောင်းမှုနေကြတယ်ပုံ 3) ။ စိန်ခေါ်မှုများထပ်ခါတစ်လဲလဲ, ထိုကဲ့သို့သောတည်ငြိမ်မှုကိုထိန်းသိမ်းရန်သော်လည်းကုန်ကျစရိတ်မှာရန်, မော်လီကျူးဆယ်လူလာနှင့် neurocircuitry အပြောင်းအလဲများကနေတစ်ဆင့်ဦးနှောက်ရဲ့ကြိုးစားမှုဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြ, အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်အတူအမှုဖြစ်ပါတယ်။ ကုန်ကျစရိတ်တစ်ဦးစူးရှခြင်းနှင့်အလွန်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးဆုတ်ခွာစဉ်အတွင်းအပျက်သဘောဆောင်သောစိတ်ခံစားမှုပြည်နယ်၏ပိုမိုဆိုးရွားလာနှင့် allostatic ဝန်၏အဓိပ္ပါယ်ကိုက်ညီနေသည်  ။ မူးယစ်ဆေးစွဲမူဘောင်ကဒီမှာအသေးစိတ်ရှင်းလင်းဘို့, ကျန်နေတဲ့အနုတ်လက္ခဏာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြည်နယ်တစ်ခုထည့်သွင်းစဉ်းစားနေသည် allostatic ပြည်နယ်  ။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအသေးစိတ်ရှင်းလင်းခံရဖို့တစ်ခုစိတ်ဝင်စားဖွယ်အယူအဆက "စစ်တိုက်ခြင်းသို့မဟုတ်လေယာဉ်ခရီးစဉ်" တုံ့ပြန်မှုကိုစေ့စပ်တူညီတဲ့စိတ်ခံစားမှုစနစ်များလည်းစွဲ-related အမှတ်တရများ၏စုစည်းပြီးတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်စေခြင်းငှါဖြစ်ပါသည်။
စွဲ, Antireward နှင့်စိတ်ခံစားမှုမှတ်ဉာဏ်
အများကြီးအထောက်အထားမူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်ထို့ထက် ပို. တိတိကျကျ psychostimulant မူးယစ်ဆေးဝါး, သိမြင်မှုစွမ်းဆောင်ရည်ကိုမြှင့်တင်ရန်နိုင်သည်ကိုဖော်ပြသည်။ ထိုသို့သောသက်ရောက်မှုအမြင်, အာရုံစူးစိုက်မှု, arousal နှင့်လှုံ့ဆျောမှုအပေါ်အဖြစ်သင်ယူမှုနှင့်မှတ်ဉာဏ်အပေါ်လုပ်ရပ်များပါဝင်နိုင်ပါသည်။ သို့သော်ဖြစ်နိုင်သည်ကိုပိုမိုအရေးကြီးသောစွဲ၏ neurobiology အဘို့, အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးမူးယစ်ဆေးလုပ်ရပ်များ၏အပြုသဘောဆောင်နှင့်အပျက်သဘောအားဖြည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများ၏မှတ်ဉာဏ်ပြောင်းလဲစေနိုင်သည်။ ပို. ပင်စိတ်ဝင်စားဖွယ်မူးယစ်ဆေးလုပ်ရပ်များ၏မှတ်ဉာဏ်ထိုကဲ့သို့သောအမှတ်တရများတစ်ဦးအထူးသဖြင့်အပိုဆောင်း salience သဘောဆောငျမဆိုထူးခြားသောအာရုံကြောအလွှာရှိပါတယ်ရှိမရှိဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အဆိုပါအယူအဆစွဲ၏အမှောင်ဘက်ခြမ်းများအတွက်အာရုံကြောအလွှာဟာ "စိတ်ခံစားမှု" မှတ်ဉာဏ်၏အာရုံကြောအလွှာနှင့်အတူ signficantly ထပ်ဖြစ်ပါတယ်။
နှစ်ဦးစလုံးသည်လူ့နှင့်တိရစ္ဆာန်လေ့လာမှုများကနေအများကြီးအထောက်အထားအလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများအေးစက်အပြုသဘောအားဖြည့်ဂုဏ်သတ္တိများသိရှိစေရန်နှင့်အပျက်သဘောအားဖြည့်ဂုဏ်သတ္တိများအေးစက်နိုငျသောအယူအဆထောက်ခံပါတယ်။ မူးယစ်ဆေးတဏှာနှင့် relapse ၏တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များဖွံ့ဖြိုးပြီးနှင့်သန့်စင်ပြီးခံရဖို့ဆက်လက်ပေမယ့်ယနေ့အထိအကြီးအကျယ်ထိုကဲ့သို့သော conditional အားဖြည့်အဖြစ်အားဖြည့်များ၏အလယ်တန်းသတင်းရင်းမြစ်ထင်ဟပ်ကြပါပြီ [52, 87] ။ တစ်ဦးကအေးစက်စစ်ကူအဓိကစစ်ကူနှင့်အတူအသင်းအဖွဲ့များမှတဆင့်ဂုဏ်သတ္တိများအားဖြည့်ရရှိသည်ဆိုကြားနေလှုံ့ဆော်မှုအဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ မူးယစ်ဆေး Self-အုပ်ချုပ်ရေးပတျသကျတဲ့အခွအေနေအားဖြည့်ပါရာဒိုင်းမှာတော့ဘာသာရပ်များတစ်ဦးမူးယစ်ဆေးဝါးဆေးထိုး (တက်ကြွစွာလီဗာ) ကနောက်တော်သို့လိုက်အကျဉ်းလှုံ့ဆော်မှု၏တင်ပြချက်များနှင့်အခြားလီဗာအပေါ်တုံ့ပြန်မှုအတွက်တဦးတည်းလီဗာရလဒ်အပေါ်ထားတဲ့တုံ့ပြန်မှုနှစ်ခုခရိုနီင်တစ်ဦး operating box ထဲမှာလေ့ကျင့်သင်ကြားနေကြ [; စမ်းသပ်မှု (မလှုပ်မရှားလီဗာတစ်လျှောက်လုံးအဘယ်သူမျှမအကျိုးဆက်များရှိ12, 82]) ။ နောက်ပိုင်းတွင်မူးယစ်ဆေးဝါးဆေးထိုး၏မရှိခြင်းအတွက်တုံ့ပြန်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ယခင်ကကြားနေ, မူးယစ်ဆေး-တွဲလှုံ့ဆော်မှုများ၏စွမ်းရည်ကို၎င်းလှုံ့ဆော်မှုများအားဖြည့်တန်ဖိုးကိုတစ်အတိုင်းအတာပေးပါသည်။ အားဖြည့်ဒုတိယယူမှုကိုအချိန်ဇယား [မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အခြေအနေအားဖြည့်ဂုဏ်သတ္တိများတစ်ခုအတိုင်းအတာအဖြစ်ကိုလည်းသုံးနိုငျ22] ။ မျောက်ဝံများနှင့်ကြွက်များတွင်အလုပ် [ယုံကြည်စိတ်ချရသောကင်းများအတွက်တုံ့ပြန်ဒုတိယယူမှုကိုအချိန်ဇယားနှင့်အတူထူထောင်နိုင်အကြံပြု79] ။ Noncontingent မူးယစ်ဆေးအုပ်ချုပ်ရေးသို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေးဖြန့်ဝေနှင့်အတူတွဲယခင်ကကြားနေလှုံ့ဆော်မှုလည်းသုဉ်း (reinstatement) အောက်ပါမူးယစ်ဆေးရှာထုတ်ယူနိုင်ပါတယ်။ မူးယစ်ဆေး Self-အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်အတူတွဲသို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေး Self-အုပ်ချုပ်ရေးကြိုတင်ခန့်မှန်းခဲ့ကြကြောင်းမူးယစ်ဆေးဝါးသို့မဟုတ်တွေကို [သုဉ်းပြီးနောက် noncontingently လျှောက်ထားတဲ့အခါမှာအဖြစ်ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းလှုံ့ဆော်မှုထမ်းဆောင်နိုင်နှင့်အပြုအမူရှာကြံမူးယစ်ဆေးဝါး၏ reinstatement သွေးဆောင်ပါလိမ့်မယ်13, 82, 88] ။ အခွအေနေအရပျကို preference ကိုပါရာဒိုင်းကိုလည်းအော်ပရေတာ Paradigm ပေးအစီအမံမှသဘောတရားဆင်တူဖြစ်သော conditional အားဖြည့်, တစ်တိုင်းတာပေးစွမ်းသည်။ အများအပြားကကျယ်ပြန့်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း [အရပျ preference ကိုပါရာဒိုင်းပေါ်မှာရေးထားတဲ့ပြီ10, 89, 90, 94].
အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏ထိုကဲ့သို့သောအေးစက်အပြုသဘောအားဖြည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများ, reinstatement ၏အထူးသဖြင့်အာရုံကြောအလွှာ, အနျူကလိယ accumbens နှင့် basolateral amygdala ကနေ amygdala နှင့်နျူကလိယ accumbens ၏ဗဟိုနျူကလိယမှနျတိုကျရိုကျ cortex ကနေ glutamatergic လမ်းကြောင်း၏ activation ပါဝင်ပတ်သက်နေ (များအတွက်အာရုံကြောအလွှာ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းသည်, [တွေ့မြင်17, 30, 83].
အေးစက် opiate ဆုတ်ခွာဆေးပညာရှုလေ့လာခဲ့သည်။ မူးယစ်ဆေးအတွေ့အကြုံများနဲ့ဆက်စပ်ပတ်ဝန်းကျင်မှပြန်လာသည့်အခါဟောင်းများ opioid စွဲမကြာခဏ [opioid abstinence အလားတူရောဂါလက္ခဏာတွေသတင်းပို့62] ။ methadone အပေါ်ထိန်းသိမ်းထားဟောင်းတဦးဘိန်းဖြူစွဲတစ်ခုစမ်းသပ်လေ့လာမှုမှာ, opioid ရန်ထိုးထပ်တလဲလဲ [တဲ့လေသံနှင့် Peppermint အနံ့နှင့်အတူတွဲခဲ့ကြ63] ။ သာလသေံနဲ့အနံ့၏နောက်ဆက်တွဲတင်ဆက်မှုအီ၏ပုဂ္ဂလဒိဋ္သက်ရောက်မှုအဖြစ်ဆုတ်ခွာ၏ရည်ရွယ်ချက်မှာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရိပ်လက္ခဏာနှစ်မျိုးလုံးရူးနှမ်း။ အလားတူသက်ရောက်မှုမျောက်နှင့်ကြွက်နှစ်ဦးစလုံးမော်ဒယ်များအတွက်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ Self-အုပ်ချုပ်ရေးမှူး opioids ခွင့်ပြုခဲ့ကြသည်ဟုမျောက်ဝံများနှင့်ကြွက်သွေးကြောသွင်းတစ်နေ့လျှင် 23-24 ဇကာ opioid ရန်နှင့်ယခင်ကကြားနေလှုံ့ဆော်မှုနှင့်အတူစိန်ခေါ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ opioid ရန်အတွက် opioid များအတွက်တုံ့ပြန်အတွက်အစားထိုးကဲ့သို့တိုးရူးနှမ်း။ ထပ်ခါတလဲလဲဒဿနိကဗေဒပြီးနောက်တစ်ယောက်တည်းအေးစက်လှုံ့ဆော်မှု၏တင်ဆက်မှုတစ်ယောက်တည်း opioid ရန်နှင့်အတူကြည့်ရှုလေ့လာခဲ့ရာအလားတူအဆိုပါ opioid များအတွက်တုံ့ပြန်တစ် conditional တိုး [အတွက်ရလဒ်23, 31] ။ အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အေးစက်အပျက်သဘောအားဖြည့်ဆိုးကျိုးများသာ [တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များအတွက် opioid မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အခြေအနေတွင်လေ့လာခဲ့ပေမယ့် basolateral amygdala ပါဝင်ခဲ့ကြ80] နှင့်ဖြစ်နိုင်သည်အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အေးစက်အပြုသဘောအားဖြည့်ဂုဏ်သတ္တိများဆင်တူဝန်ထမ်းတွေရဲ့ယန္တရားများ။ သို့သျောလညျးအခွအေနေဆုတ်ခွာဖို့စိတ်ခံစားမှုအစိတ်အပိုင်းလည်းမူးယစ်ဆေးရုပ်သိမ်းရေးနှင့်အလွန်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီး abstinence ၏အနုတ်လက္ခဏာအားဖြည့်ဂုဏ်သတ္တိများနှင့်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရဦးနှောက်စိတ်ဖိစီးမှု circuitry စုဆောင်းလိမ့်မည်။ အမှန်မှာဒီ "စိတ်ခံစားမှုမှတ်ဉာဏ်" အလွန်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးဆုတ်ခွာရှည်မှတွေးဆဟာ allostatic ပြည်နယ်မှအထောက်အကူဖြစ်စေလိမ့်မည်။
စိတ်ခံစားမှုမှတ်ဉာဏ်များအတွက်အာရုံကြောအလွှာကျယ်ပြန့်စူးစမ်းခြင်းနှင့်အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးနှင့်ဆက်နွယ်သောအခြေအနေများအပြုသဘောနှင့်အပျက်သဘောအားဖြည့်များအတွက်အာရုံကြောအလွှာအချို့နှင့်အတူထပ်ပြီ။ စိတ်ခံစားမှုမှတ်ဉာဏ်များအတွက်အာရုံကြောအလွှာလည်းမူးယစ်ဆေးမှီခိုအတွက် abstinence နှင့်အတူဆက်စပ်အနုတ်လက္ခဏာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြည်နယ်များနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အာရုံကြောအလွှာနဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ် neuropharmacological အပြိုင်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ စိတ်ခံစားမှုအတွေ့အကြုံများကိုမကြာခဏ [လည်း "flashbulb အမှတ်တရများ" အဖြစ်ဖော်ပြထားခဲ့ကြကြောင်းတည်မြဲခြင်းနှင့်ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းအမှတ်တရများနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်11] ။ ထိုကဲ့သို့သောစိတ်ခံစားမှုအမှတ်တရများ၏စုစည်းပြီး mediates သောသော့ကိုဦးနှောက်ဒေသဟာ basolateral amygdala ဖြစ်ပြီးစိတ်ဖိစီးမှုဟော်မုန်းနှင့်အခြား neuromodulatory noradrenergic စနစ်များကိုစနစ်များ၏ဆုံမြို့သားပါရှိသော [55, 56] ။ McGaugh, Roosendal နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များကကြော့လေ့လာမှုများတစ်စီးရီးထဲမှာ, basolateral amygdala noradrenergic activation များအတွက် key ကိုအခန်းကဏ္ဍနှင့်အတူ adrenal စိတ်ဖိစီးမှုဟော်မုန်းများ၏မှတ်ဉာဏ်-ပြောင်းလဲသက်ရောက်မှု, ပြေလည်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးရန်ပြသခဲ့သည်။ အဆိုပါ basolateral system သတင်းအချက်အလက်များစွာကိုအမျိုးမျိုး၏စုစည်းပြီး modulates ။ လူ့လေ့လာမှုများမှာတော့စိတ်ခံစားမှု arousal အားဖြင့် amgydala ၏ activation ၏ဒီဂရီ [နောက်ဆက်တွဲပြန်လည်သိမ်းဆည်းနှင့်အတူမြင့်မားဆက်နွယ်နေပါသည်9] ။ အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းထို့အပြင်သည်, basolateral amygdala အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်အတူဆက်နွယ်အေးစက်အပြုသဘောနှင့်အေးစက်အပျက်သဘောအားဖြည့်ဖြန်ဖြေအတွက်သော့ချက်အခန်းကဏ္ဍရှိပါတယ်။
မှတ်ဉာဏ်စုစည်းပြီးတိုးမြှင့်အတွက် noradrenergic ယန္တရားများများ၏အခန်းကဏ္ဍမှာ basolateral amygdala သို့ noradrenergic agonists နှင့်ရန်၏ထိုးနှင့်အတူလေ့လာမှုများတစ်စီးရီးအတွက်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ basolateral amygdala ချက်ချင်း Post-လေ့ကျင့်ရေးသို့တိုက်ရိုက်ထိုးသွင်း Norepinephrine သို့မဟုတ် noradrenergic agonists စိတ်ခံစားမှုထိုကဲ့သို့သော inhibitory ရှောင်ရှားခြင်းအဖြစ်လေ့ကျင့်ရေးတာဝန်များကိုနှိုးဆွများ၏မှတ်ဉာဏ် facilitated  Contextual ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်အေးစက်  ရေဝင်္ Spatial တာဝန်  နှင့်တစ်ခုအရာဝတ္ထုအသိအမှတ်ပြုမှုတာဝန်  ။ β-noradrenergic ရန်၏ post-သင်တန်းပေးထိုး [စိတ်ခံစားမှုတာဝန်များကိုနှိုးဆွ၏မှတ်ဉာဏ်၏စုစည်းပြီး impairing ၏ဆန့်ကျင်ဘက်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခဲ့20, 26, 59] ။ Adrenal ဟော်မုန်းကိုလည်း [သည့် basolateral amygdala အတွက် noradrenergic ယန္တရားများနှင့်အတူ interaction ကနေတဆင့်စိတ်ခံစားမှုနှိုးဆွသောအလုပ်များကိုစုစည်းပြီး facilitated75] ။ [မှတ်ဥာဏ်စုစည်းပြီး၏ CRF-binding ပရိုတိန်းကိုထုတ်လုပ် noradrenergic-မှီခိုပံ့ပိုးကူညီ၏တားစီးမှတဆင့် basolateral amygdala အတွက် CRF ၏ activation, ပစ္စုပ္ပန်စာတမ်းမှအထူးသဖြင့်ဂျာမန်76] ။ ဤရလဒ်သည် [CRF စိတ်ခံစားမှုနှိုးဆွသောအတှေ့အကွုံကြာရှည်မှတ်ဥာဏ်၏စုစည်းပြီးတစ်ဦးရွေးချယ်အခန်းကဏ္ဍစေခြင်းငှါအကြံပြု76].
အဆိုပါ amygdala နှစ်ခုအဆင့်ဆင့်မှာဦးနှောက်ကဖိစီးမှုစနစ်များ၏ပေါင်းစည်းမှုမှီခိုတစ်ဦးချင်းစီအတွက်မူးယစ်ဆေးရှာတစ်ခုလွှမ်းမိုးသော drive ကိုများအတွက်ဆွဲဆောင်မှုအခြေခံများကိုဖြစ်နိုင်သည်။ အဆိုပါ basolateral amygdala အဆိုပါ amygala ၏ဗဟိုနျူကလိယမှအဓိက projection ရှိပါတယ်။ Classic ကြောက်ရွံ့အေးစက်အတွက်ဝန်ထမ်းတွေရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်များအတွက် basolateral amygdala မှဒေသခံစံနှုန်းကိုက်ညီပြီကြောက်၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးဟာ amygdala ၏ output ကိုမှဒေသခံစံနှုန်းကိုက်ညီလျက်ရှိသည်: အ amygdala ၏ဗဟိုနျူကလိယ။ စူးရှသောရုပ်သိမ်းရေးနှင့်ပေါ်ထွက်လာသောကြောင့်ရှည်ကြာ abstinence ၏အနုတ်လက္ခဏာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြည်နယ်နှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုနှိုးဆွ၏အမှတ်တရများ၏စုစည်းပြီး: ထို့ကြောင့်ထို amygdala ၏ဗဟိုနျူကလိယနှင့် basolateral amygdala နှစ်ဦးစလုံးအတွက် CRF နှင့် norepinephrine စနစ်များကို Activation တစ်ခုချင်းစီဒိုမိန်း potentiate မှပေါင်းစပ်စေခြင်းငှါနှစ်ခုကိုသီးခြား domains များသြဇာလွှမ်းမိုးစေခြင်းငှါ အတွေ့အကြုံများ (ပုံ 4) ။ ဥပမာ, amygdala ၏ဗဟိုနျူကလိယကိုကောင်းစွာထိုကဲ့သို့သော hypothalamus နှင့်ဦးနှောက်ကို stem အဖြစ်စိတ်ခံစားမှုစကားရပ်များတွင်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရဦးနှောက်ဒေသများမှအထွက်မှမှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ ပြောင်းပြန်ဟာ basolateral amygdala စိတ်လှုပ်ရှားမှုဟာနျူကလိယ accumbens, caudate နျူကလိယ, hippocampus နှင့် entorhinal cortex ကနေတဆင့်အတွေ့အကြုံများကိုနှိုးဆွ၏အမှတ်တရများ၏စုစည်းပြီးပြေလည်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးရန်တွေးဆနေပါတယ်  ။ ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်အေးစက်ခုနှစ်, amygdala အတွင်းသတင်းအချက်အလက်အပြောင်းအလဲနဲ့နှစ်ခုယှဉ်ပြိုင်မော်ဒယ်များသင်ယူမှုစဉ်အတွင်းစေ့စပ်ခံရဖို့တွေးဆခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါအမှတ်စဉ်မော်ဒယ်မှာအေးစက်လှုံ့ဆော်မှုနှင့်ခြွင်းချက်မရှိလှုံ့ဆော်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းအချက်အလက်ဝင်သောနှင့် BLA နှင့်ဆက်စပ်သည်, ဤသတင်းအချက်အလက်များကိုထို့နောက်ကွောကျရှံ့သောစကားရပ်များအတွက် amygdala ၏ဗဟိုနျူကလိယမှကူးစက်သည်။ တနည်းအားဖြင့်တစ်ဦးအပြိုင်မော်ဒယ် [သည့် amygdala ၏ basolateral amygdala နှင့်ဗဟိုနျူကလိယဝန်ထမ်းတွေရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်များကိုလုပ်ဆောင်နှစ်ဦးစလုံးကြောင့်အဆိုတင်သွင်း98] ။ ထို့ကြောင့်ဟော်မုန်း, noradrenergic နှင့် CRF စနစ်များကိုမူးယစ်ဆေးရှာမောင်းကြောင့်အနုတ်လက္ခဏာအားဖြည့်များအတွက်အခြေခံဖွဲ့စည်းစွဲ၏ allostatic ပြည်နယ်မောင်းကိုကူညီပေးပါသောစိတ်ခံစားမှုပြည်နယ်ရှည်ကြောင်းဝန်ထမ်းတွေရဲ့ယန္တရားများ potentiate မှမူးယစ်ဆေးဆုတ်ခွာ၏ဆန္ဒရှိအကျိုးဆက်များအားဖြင့် activated ခံရဖို့တွေးဆစေခြင်းငှါ ။
စိတ်ခွန်အားနိုးမှီခိုခြင်းနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှတ်ဉာဏ်အကြားယူဆချက်ဆက်ဆံရေးဟာစုစည်းတင်ပြရန်သိထားပုံ။ စိတ်ခံစားမှုပြည်နယ်များကောင်းစွာ relapse ဖြစ်ပေါ်ဖို့လူသိများဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, တစ်ဦးယန္တရားမူးယစ်ဆေးဝါး၏ထားတဲ့အတွက်အနုတ်လက္ခဏာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြည်နယ်တစ်ဦးအပြိုင်အရေးယူဖြစ်နိုင်သည် ...
စာရေးသူကဒီလက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်၏ပြင်ဆင်မှုနဲ့သူ့ရဲ့အကူအညီအတွက်မိုက်ကယ် Arends ကျေးဇူးတင်ချင်ပါတယ်။ သုတေသနကနျြးမာရေးအမျိုးသား Institutes ဟာဆီးချိုရောဂါနှင့် Digestive အမျိုးသားအင်စတီကျုနှင့်ကျောက်ကပ်ရောဂါများအနေဖြင့်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုအပေါ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အင်စတီကျုကနေအရက်အလွဲသုံးမှုအပေါ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အင်စတီကျုနှင့်အရက်, DA06420, DA08459 နှင့် DA10072 ထံမှ AA04043 နှင့် AA04398 ပေးအပ်နှင့် DK26741 ကထောက်ခံခဲ့သည်။ သုတေသနမှာလည်းအရက်နှင့်စွဲလမ်းမှုသုတေသနများအတွက် Pearson ရေးစင်တာတို့ကထောက်ခံခဲ့သည်။ ဤသည်အဆိုပါ Scripps Research Institute မှကနေထုတ်ဝေအရေအတွက်ကို 19965 ဖြစ်ပါတယ်။
1 ။ Ahmed က SH, Kenny PJ, Koob gf, မြင့်တက်ကိုကင်းသုံးစွဲခြင်းနှင့်ဆက်နွယ် hedonic allostasis များအတွက် Markou အေ Neurobiological သက်သေအထောက်အထား။ နတ် neuroscience ။ 2002; 5: 625-626 ။ [PubMed]
2 ။ Alheid gf, De Olmos JS, Beltramino CA. Amygdala နှင့်တိုးချဲ့ amygdala ။ ခုနှစ်တွင်: Paxinos, G, အယ်ဒီတာ။ အဆိုပါကြွက်ဦးနှောက်အာရုံကြောစနစ်၏။ San Diego မှ: ပညာရေးဆိုင်ရာစာနယ်ဇင်း; 1995 ။ စစ။ 495-578 ။
3 ။ Alling ကို C, Balldin J ကို, Bokstrom K ကို Gottfried CG, Karlsson ငါအီသနော၏နာတာရှည်အလွဲသုံးစားမှုပြီးနောက်နှောင်းပိုင်းကပြန်လည်နာလန်ထူကာလကြာချိန်ပေါ် Langstrom G. အလေ့လာရေး: ထဲကဓာတုပစ်စညျးမြားနှငျ့စိတ်ရောဂါညွှန်းကိန်းတစ်ခု Cross-Section လေ့လာမှု။ Acta Psychiatric Scand ။ 1982; 66: 384-397 ။ [PubMed]
4 ။ American Psychiatric Association ။ စိတ်ရောဂါ diagnostic နှင့်စာရင်းအင်းကို manual ။4။ ဝါရှင်တန်ဒီစီ: အမေရိကန်စိတ်ရောဂါစာနယ်ဇင်း; 2000 ။ စာသားမတည်းဖြတ်မူ။
5 ။ Baldwin HA, Rassnick S က, Rivier J ကို, Koob gf, Britton KT ။ CRF ရန်ကြွက်များတွင်အီသနောဆုတ်ခွာရန် "anxiogenic" တုန့်ပြန်နောက်ကြောင်းပြန်။ Psychopharmacology ။ 1991; 103: 227-232 ။ [PubMed]
6 ။ Becker က HC ။ ကြိုတင်အီသနောဆုတ်ခွာဖြစ်စဉ်များ၏နံပါတ်နှင့်နောက်ဆက်တွဲဆုတ်ခွာသိမ်းယူမှု၏ပြင်းထန်မှုအကြားအပြုသဘောဆောင်သည့်ဆက်ဆံရေးမျိုး။ Psychopharmacology ။ 1994; 116: 26-32 ။ [PubMed]
7 ။ Bester H ကို, Menendez L ကို, Besson JM, Bernard JF ။ Spino (trigemino) parabrachiohypothalamic လမ်းကြောင်း: နာကျင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်တစ်ဦးပါဝင်ပတ်သက်မှုများအတွက် electrophysiological သက်သေအထောက်အထား။ J ကို Neurophysiol ။ 1995; 73: 568-585 ။ [PubMed]
8 ။ Breese ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်း, Overstreet DH, Knapp DJ သမား, Navarro အမ်မတိုင်မီကမျိုးစုံအီသနောထုတ်ယူစိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင်စိုးရိမ်စိတ်ကဲ့သို့သောအပြုအမူမြှင့်တင်ရန်: CRF အားဖြင့်တားစီး1- နှင့် benzodiazepine-receptor ရန်နှင့် 5-HT1a-receptor agonist ။ Neuropsychopharmacology ။ 2005; 30: 1662-1669 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
9 ။ Cahill, L, Haier RJ, Fallon J ကို, Alkire MT, တန်ကို C, Keator: D, Wu J ကို, McGaugh JL ။ စိတ်ခံစားမှုအချက်အလက်များ၏ရေရှည်အခမဲ့ပြန်လည်သိမ်းဆည်းဆက်နွယ်နေကြောင်း encoding ကမှာ Amygdala လှုပ်ရှားမှု။ proc Natl Acad သိပ္ပံယူအက်စ်အေ။ 1996; 93: 8016-8021 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
10 ။ Carr က GD, Fibiger HC, Phillips က AG က။ မူးယစ်ဆေးဆုလာဘ်တစ်ခုအတိုင်းအတာအဖြစ်အေးစက်သောအရပ် preference ကို။ Liebman JM, Cooper က SJ, အယ်ဒီတာများ in: ။ ဆုလာဘ်၏ neuropharmacological အခြေခံ။ vol ။ 1 ။ နယူးယောက်: အောက်စ်ဖို့တက္ကသိုလ်ကစာနယ်ဇင်း; 1989 ။ စစ။ 264-319 ။ စီးရီးခေါင်းစဉ်: စမ်းသပ် psychopharmacology အတွက်ခေါင်းစဉ်များ။
11 ။ Conway MA ။ Flashbulb အမှတ်တရများ။ Hillsdale NJ: Lawrence Erlbaum; 1995 ။
12 ။ Davis က WM, Smith ကစင်ကာပူဒေါ်လာ။ မူးယစ်ဆေး-ရှာကြံအပြုအမူများစတင်, ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများနှင့်မျိုးသုဉ်းအခြေအနေများစစ်ကူ၏အခန်းက္ပ။ Pavlovian J ကို Biol သိပ္ပံ။ 1976; 11: 222-236 ။ [PubMed]
13 ။ Davis က WM, Smith ကစင်ကာပူဒေါ်လာ။ မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အကြိုးဂုဏ်သတ္တိများတစ်ခုအတိုင်းအတာအဖြစ်အားဖြည့်အေးစက်။ ခုနှစ်တွင်: Bozarth MA, အယ်ဒီတာ။ နှိပ်စက်မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အားဖြည့်ဂုဏ်သတ္တိများအကဲဖြတ်ခြင်းနည်းလမ်းများ။ နယူးယောက်: Springer-Verlag; 1987 ။ စစ။ 199-210 ။
14 ။ di Chiara, G, Bassareo V ကို, Fenu S က, De Lucas, MA, Spina L ကို, Cadoni ကို C, Acquas အီး, Carboni အီး, Valentini V ကို, Lecca ဃ Dopamine နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲ: အနျူကလိယ shell ကိုကွန်နက်ရှင် accumbens ။ Neuropharmacology ။ 2004; 47 (ပျော့ပျောင်း 1): 227-241 ။ [PubMed]
15 ။ Doyon WM, York မြို့ JL, Diaz LM, ရှံဆုန်နာရီ, Czachowski CL, Gonzales RA ။ နျူကလီးယပ်အတွက် Dopamine လှုပ်ရှားမှုပါးစပ်အီသနော Self-အုပ်ချုပ်ရေးသူတွေရဲ့စားသောက်အဆင့်စဉ်အတွင်း accumbens ။ အရက် Clin Exp Res ။ 2003; 27: 1573-1582 ။ [PubMed]
16 ။ Dworkin SI, Guerin gf, Co. , C, Goeders NE, Smith က je ။ သွေးကြောသွင်းမော်ဖင်းအကိုက် Self-အုပ်ချုပ်ရေးအပေါ်နျူကလိယ accumbens ၏ 6-hydroxydopamine ကိုတွေ့ရှိရပါသည်တစ်ခုအကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိခြင်း။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 1988; 30: 1051-1057 ။ [PubMed]
17 ။ Everitt BJ, ME Wolf ။ Psychomotor လှုံ့ဆော်စွဲ: တစ်အာရုံကြောစနစ်များကိုရှုထောင့်။ J ကို neuroscience ။ 2002; 22: 3312-3320 ။ erratum: 22 (16): 1a ။ [PubMed]
18 ။ ကူးတို့ခ, Roozendaal B, McGaugh JL ။ မှတ်ဉာဏ်သိုလှောင်မှုမော်ဂျူအတွက် basolateral amygdala အတွက် alpha1-adrenoceptors ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှု။ EUR J ကို Pharmacol ။ 1999; 372: 9-16 ။ [PubMed]
19 ။ funk CK, O'Dell LE, ခရော EF, Koob gf ။ အဆိုပါ amygdala ၏ဗဟိုနျူကလိယအတွင်း Corticotropin-releasing အချက်ဆုတ်ခွာ, အီသနော-မှီခိုကြွက်များတွင်တိုးမြှင်အီသနော Self-အုပ်ချုပ်ရေး mediates ။ J ကို neuroscience ။ 2006; 26: 11324-11332 ။ [PubMed]
20 ။ Gallagher M က, Kapp BS, အောက် RE, Driscoll PA ဆိုပြီး။ မှတ်ဉာဏ်ဖွဲ့စည်းရေး: အ amygdala အတွက်တိကျတဲ့ neurochemical system အတွက်သက်သေအထောက်အထား။ သိပ္ပံ။ 1977; 198: 423-425 ။ [PubMed]
21 ။ ဂျော့ခ်ျအို Ghozland S က, Azar MR, ဝါဂွမ်း P ကို, Zorrilla EP, Parsons LH, O'Dell LE ရစ်ချတ်ဆင် HN, Koob gf ။ CRF-CRF1 system ကို activation နီကိုတင်း-မှီခိုကြွက်များတွင်နီကိုတင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးအတွက်ဆုတ်ခွာ-သွေးဆောင်တိုး mediates ။ proc Natl Acad သိပ္ပံယူအက်စ်အေ။ 2007; 104: 17198-17203 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
22 ။ Goldberg က SR, Gardner ML ။ ဒုတိယအယူမှုကိုအချိန်ဇယား: မူးယစ်ဆေး Self-အုပ်ချုပ်မှုနှင့်ဆက်စပ်အကျဉ်းသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့်ထိန်းချုပ်ထားသောအပြုအမူများတိုးချဲ့ပာ။ ခုနှစ်တွင်: Thompson က T က, Johanson အီး, အယ်ဒီတာများ။ လူ့မူးယစ်ဆေးမှီခို၏အမူအကျင့်ဆေးဝါးဗေဒ။ vol ။ 37 ။ Rockville MD: မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုအပေါ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အင်စတီကျု, 1981 ။ စစ။ 241-270 ။ စီးရီးခေါင်းစဉ်: NIDA သုတေသန monograph ။ [PubMed]
23 ။ Goldberg က SR, Kelleher RT ကို။ ရှဉ့်များနှင့်မျောက်တွေကိုအတွက်ကိုကင်းများ၏စီစဉ်ထားထိုးကထိန်းချုပ်ထားအပြုအမူ။ J ကို Exp စအိုပြုမူနေ။ 1976; 25: 93-104 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
24 ။ Greenwell TN, Funk CK, ဝါဂွမ်း P ကိုရစ်ချတ်ဆင် HN, Chen က SA, ဆန် K သည်, Lee က MJ, Zorrilla EP, Koob gf ။ Corticotropin-releasing အချက်-1 အဲဒီ receptor ရန် long- ဘိန်းဖြူ Self-အုပ်ချုပ်မှုလျော့ပေမယ့်မရရေတို access ကိုကြွက်များ။ စှဲလမျးသူ Biol ။ စာနယ်ဇင်းများတွင် 2009 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
25 ။ Grobin AC အ, Matthews က DB, Devaud ll, နက်ဖြန် AL ။ ဂါဘမြို့သားများ၏အခန်းကဏ္ဍA အီသနော၏စူးရှသောနှင့်နာတာရှည်အကျိုးသက်ရောက်မှုများအတွက် receptors ။ Psychopharmacology ။ 1998; 139: 2-19 ။ [PubMed]
26 ။ Hatfield T က, McGaugh JL ။ အဆိုပါ basolateral amygdala posttraining သို့ထုံမွှန်း Norepinephrine တစ် Spatial ရေဝင်္ task ထဲမှာ retention ကိုပိုကောင်းစေပါတယ်။ Neurobiol Mem ကိုလေ့လာပါ။ 1999; 71: 232-239 ။ [PubMed]
27 ။ neurochemical နှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာအကျိုးဆက်များ: ဟာနန်ဒက်ဇ်, G, Hamdani S က, Rajabi H ကို, Conover K ကို Stewart က J ကို, Arvanitogiannis တစ်ဦးက, Shizgal P. ကြွက် medial forebrain ဆော့ဝဲအစုအဝေး၏အကြိုးဆွတာရှညျ။ ပြုမူနေ neuroscience ။ 2006; 120: 888-904 ။ [PubMed]
28 ။ Heyser CJ, Roberts သည် AJ, Schulteis, G, Koob gf ။ တစ်ဦး opiate ရန်ဗဟိုအုပ်ချုပ်မှုကြွက်များတွင်ခံတွင်းအီသနော Self-အုပ်ချုပ်မှုလျော့နည်းစေပါသည်။ အရက် Clin Exp Res ။ 1999; 23: 1468-1476 ။ [PubMed]
29 ။ Kalivas PW, McFarland K ကို Bower က S, Szumlinski K သည်ရှီကျင်းဖျင် ZX, Baker ဃအချိုမှုကင်းရန်ဂီယာနဲ့စွဲ။ ခုနှစ်တွင်: Moghaddam B, Wolf က ME, အယ်ဒီတာများ။ အချိုမှုများနှင့်အခြားသောကောင်းကျိုးနှင့်လှုံ့ဆျောမှုပုံမမှန်။ vol ။ 1003 ။ နယူးယောက်: သိပ္ပံနယူးယောက်အကယ်ဒမီ; 2003 ။ စစ။ 169-175 ။ စီးရီးခေါင်းစဉ်: သိပ္ပံ၏နယူးယောက်အကယ်ဒမီ၏ရာဇဝင်။ [PubMed]
30 ။ Kalivas PW, ဆန္ဒပြ neuroplasticity တစ်ဦးရောဂါဗေဒအဖြစ် O 'Brien C. မူးယစ်ဆေးစွဲ။ Neuropsychopharmacology ။ 2008; 33: 166-180 ။ [PubMed]
31 ။ Kenny PJ, Chen က SA, Kitamura အို Markou တစ်ဦးက, Koob gf ။ အေးစက်ဆုတ်ခွာဘိန်းဖြူသုံးစွဲမှုမောင်းနှင့်ဆုလာဘ် sensitivity ကိုလျော့နည်းစေပါသည်။ J ကို neuroscience ။ 2006; 26: 5894-5900 ။ [PubMed]
32 ။ Koob gf ။ အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါး: ခန္ဓာဗေဒ, ဆေးဝါးဗေဒနှင့်ဆုလာဘ်လမ်းကြောင်း၏ function ကို။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း Pharmacol သိပ္ပံ။ 1992; 13: 177-184 ။ [PubMed]
33 ။ Koob gf ။ Corticotropin-releasing အချက်, norepinephrine နှင့်စိတ်ဖိစီးမှု။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1999; 46: 1167-1180 ။ [PubMed]
34 ။ Koob gf ။ လှုံ့ဆျောမှု၏ Allostatic အမြင်: psychopathology များအတွက်ဂယက်ရိုက်။ ခုနှစ်တွင်: Bevins RA, Bardo MT, အယ်ဒီတာများ။ မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှု၏ etiology အတွက်စိတ်ခွန်အားနိုးအချက်များ။ vol ။ 50 ။ လင်ကွန်း NE: Nebraska စာနယ်ဇင်းတက္ကသိုလ်; 2004 ။ စစ။ 1-18 ။ စီးရီးခေါင်းစဉ်: Motivation အပေါ် Nebraska စာတမ်းဖတ်ပွဲ။
35 ။ Koob gf ။ စွဲလမ်းမှု၏ neurobiology: ရောဂါများအတွက်သက်ဆိုင်ရာတစ်ဦး neuroadaptational အမြင်။ စွဲလမ်း။ 2006; 101 (ပျော့ပျောင်း 1): 23-30 ။ [PubMed]
36 ။ Koob gf ။ စွဲလမ်းအတွက်ဦးနှောက်ကဖိစီးမှုစနစ်များကိုတစ်အခန်းကဏ္ဍ။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2008; 59: 11-34 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
37 ။ Koob gf ။ စွဲလမ်းအတွက် compulsive ၏အမှောင်ဘက်ခြမ်းဘို့ Neurobiological အလွှာဟာ။ Neuropharmacology ။ 2009; 56 (ပျော့ပျောင်း 1): 18-31 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
38 ။ Koob gf, Bloom FE ။ မူးယစ်ဆေးမှီခို၏ဆယ်လူလာနှင့်မော်လီကျူးယန္တရားများ။ သိပ္ပံ။ 1988; 242: 715-723 ။ [PubMed]
39 ။ Koob gf, Everitt BJ, Robbins TW ။ ဆုလာဘ်, လှုံ့ဆျောမှုနှင့်စွဲလမ်း။ ခုနှစ်တွင်: Squire ကို LG, Berg က D:, Bloom FE, ဒူလက်ခ်က S, Ghosh တစ်ဦးက, Spitzer N ကို, အယ်ဒီတာများ။ အခြေခံမှ neuroscience ။3။ အမ်စတာဒမ်: ပညာရေးဆိုင်ရာစာနယ်ဇင်း; 2008 ။ စစ။ 987-1016 ။
40 ။ Koob gf, Heinrich SC ။ ဖိအားအပြုအမူတုံ့ပြန်မှုအတွက် corticotropin-releasing အချက်နှင့် urocortin တစ်အခန်းကဏ္ဍ။ ဦးနှောက် Res ။ 1999; 848: 141-152 ။ [PubMed]
41 ။ Koob gf, Le Moal အမ်မူးယစ်ဆေးအလွဲသုံးမှု: Hedonic homeostatic dysregulation ။ သိပ္ပံ။ 1997; 278: 52-58 ။ [PubMed]
42 ။ Koob gf, Le Moal အမ်မူးယစ်ဆေးစွဲ, ဆုလာဘ်၏ dysregulation နှင့် allostasis ။ Neuropsychopharmacology ။ 2001; 24: 97-129 ။ [PubMed]
43 ။ Koob gf, ဆုလာဘ် neurocircuitry နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲလမ်း၏ 'မှောင်မိုက်ဘက်' '၏သည် Le Moal အမ်ပလပ်စတစ်။ နတ် neuroscience ။ 2005; 8: 1442-1444 ။ [PubMed]
44 ။ Koob gf, စွဲလမ်းအတွက်ပြိုင်ဘက်စိတ်ခွန်အားနိုးဖြစ်စဉ်များအဘို့သည် Le Moal အမ် Neurobiological ယန္တရားများ။ ဖီးလ်ဖြတ်ကျော် Royal Society B ကို Biol သိပ္ပံ။ 2008a; 363: 3113-3123 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
45 ။ Koob gf, Le Moal အမ်စွဲခြင်းနှင့်ဦးနှောက် antireward စနစ်။ အမ်းဗြာ Psychol ။ 2008b; 59: 29-53 ။ [PubMed]
46 ။ Koob gf, Zorrilla EP ။ Corticotropin-releasing အချက်-1 ရန်။ မူးယစ်ဆေး Discover ယနေ့တွင် Ther Strat ။ 2009 တင်သွင်းခဲ့ပါသည်။
47 ။ Kornetsky ကို C, Esposito ru ။ Euphorigenic မူးယစ်ဆေးဝါးများ: ဦးနှောက်၏အကျိုးကိုလမ်းကြောင်းအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှု။ ဗဟိုဘဏ် proc ။ 1979; 38: 2473-2476 ။ [PubMed]
48 ။ Kreek MJ, Koob gf ။ မူးယစ်ဆေးမှီခို: ဦးနှောက်ကိုဆုလာဘ်လမ်းကြောင်း၏စိတ်ဖိစီးမှုများနှင့် dysregulation ။ မူးယစ်ဆေးအရက်မူတည်တယ်။ 1998; 51: 23-47 ။ [PubMed]
49 ။ LaLumiere RT ကို, Buen တီဗီ, McGaugh JL ။ norepinephrine ၏အချင်းချင်းအပြန်အလှန် basolateral amygdala တာဟာ Contextual ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်အေးစက်အဘို့မှတ်ဉာဏ်၏စုစည်းမြှင့်တင်ရန် post-သင်တန်းပေး။ J ကို neuroscience ။ 2003; 23: 6754-6758 ။ [PubMed]
50 ။ le Doux je, Iwata J ကို, Cicchetti P ကို, Reis DJ သမား။ ဗဟို amygdaloid နျူကလိယ၏ကွဲပြားခြားနားသောစီမံချက်များ conditional ကြောက်စိတ်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရနှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာဆက်စပ်ဖျန်ဖြေ။ J ကို neuroscience ။ 1988; 8: 2517-2529 ။ [PubMed]
51 ။ Markou တစ်ဦးက, Koob gf ။ ဆုလာဘ်တစ်ခုအတိုင်းအတာအဖြစ် Intracranial Self-stimulation တံခါးခုံ။ ခုနှစ်တွင်: Sahgal တစ်ဦးက, အယ်ဒီတာ။ အမူအကျင့်မှ neuroscience: တစ်လက်တွေ့ကျတဲ့ချဉ်းကပ်။ vol ။2။ အောက်စဖို့ဒ: IRL စာနယ်ဇင်း; 1993 ။ စစ။ 93-115 ။
52 ။ Markou တစ်ဦးက, Weiss က F, ရွှေ LH ကာဣန SB, Schulteis, G, Koob gf ။ မူးယစ်ဆေးတဏှာ၏တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များ။ Psychopharmacology ။ 1993; 112: 163-182 ။ [PubMed]
53 ။ Mason ဆို BJ, အလင်း JM, Escher T က, Drobes DJ သမား။ မဟုတ်တဲ့ကုသမှု-ရှာကြံအရက်သမားအတွက်တဏှာ၏အစီအမံအပေါ်အပြုသဘောနှင့်အပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်စေလှုံ့ဆော်မှုများနှင့်အဖျော်ယမကာတွေကို effect ။ Psychopharmacology ။ 2008; 200: 141-150 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
54 ။ McEwen BS ။ Allostasis နှင့် allostatic ဝန်: neuropsychopharmacology များအတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှု။ Neuropsychopharmacology ။ 2000; 22: 108-124 ။ [PubMed]
55 ။ McGaugh JL ။ မှတ်ဉာဏ်စုစည်းပြီးနှင့် amygdala: တစ်စနစ်များကိုရှုထောင့်။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း neuroscience ။ 2002; 25: 456 ။ [PubMed]
56 ။ McGaugh JL ။ အဆိုပါ amygdala စိတ်ခံစားမှုအတွေ့အကြုံများကိုနှိုးဆွ၏အမှတ်တရများ၏စုစည်းပြီး modulates ။ အမ်းဗြာ neuroscience ။ 2004; 27: 1-28 ။ [PubMed]
57 ။ Merchenthaler ငါ Vigh S က, Petrusz P ကို, Schally AV စနစ်။ ကြွက်ဦးနှောက်ထဲမှာ corticotropin-releasing အချက် (CRF) ၏ Immunocytochemical localization ။ နံနက် J ကို Anat ။ 1982; 165: 385-396 ။ [PubMed]
58 ။ Merlo-Pich အီး, Lorang M က, Yeganeh M က, Rodriguez က de Fonseca က F, Raber J ကို, Koob gf, ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းစိတ်ဖိစီးမှုနှင့်အီသနောဆုတ်ခွာစဉ်ကနိုးကြွက်များ၏ amygdala အတွက် extracellular corticotropin-releasing အချက်ကဲ့သို့ immunoreactivity အဆင့်ဆင့်၏ Weiss အက်ဖ်တိုးတက်တိုင်းတာအဖြစ် microdialysis ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ J ကို neuroscience ။ 1995; 15: 5439-5447 ။ [PubMed]
59 ။ Miranda MI, LaLumiere RT ကို, Buen တီဗီ, Bermude နှင့်-Rattoni က F, McGaugh JL ။ အဆိုပါ basolateral amygdala ချို့ယွင်းအတွက် noradrenergic receptors ၏ပိတ်ဆို့မှတ်ဉာဏ်ကိုမြည်းစမ်း။ EUR J ကို neuroscience ။ 2003; 18: 2605-2610 ။ [PubMed]
60 ။ Myers RD ။ အဆိုပါ limbic စနစ် THP-reactive က်ဘ်ဆိုက်များအားဖြင့်ထုတ်ဖော်ပြသဦးနှောက်ဖြန်ဖြေအရက်သေစာသောက်သုံးအတွက်ခန္ဓာဗေဒ "circuitry" ။ အရက်။ 1990; 7: 449-459 ။ [PubMed]
61 ။ Nestler EJ ။ စွဲလမ်းတစ်ဘုံမော်လီကျူးလမ်းကြောင်းရှိပါသလား? နတ် neuroscience ။ 2005; 8: 1445-1449 ။ [PubMed]
62 ။ O 'Brien က CP ။ လူ့မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲလမ်းထဲမှာအေးစက်အချက်များ၏စမ်းသပ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ Pharmacol ဗျာ 1975; 27: 533-543 ။ [PubMed]
63 ။ O 'Brien က CP, Testa J ကို, O' Brien တီဂျေ, Brady JP, ဝဲလ်ခလူသားတွေအတွက်မူးယစ်ဆေးဝါးဆုတ်ခွာအေးစက်။ သိပ္ပံ။ 1977; 195: 1000-1002 ။ [PubMed]
64 ။ ကြားရှိ J ကို, septal ဧရိယာနှင့်ကြွက်ဦးနှောက်၏အခြားဒေသလျှပ်စစ်ဆွကထုတ်လုပ် Milner P. အပြုသဘောဆောင်သောအားဖြည့်။ J ကို comp Physiol Psychol ။ 1954; 47: 419-427 ။ [PubMed]
65 ။ သံလွင် MF, Koenig HN, Nannini MA, Hodge CW ။ နောက်ဆက်တွဲအီသနောစားသုံးမှုအားဖြင့်အီသနောရုပ်သိမ်းရေးနှင့်လျော့ချရေးစဉ်အတွင်း stria terminalis ၏အိပ်ရာနျူကလိယအတွက် extracellular CRF အဆင့်ဆင့်သို့ခြီးမွှောကျ။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 2002; 72: 213-220 ။ [PubMed]
66 ။ Pettit HO, Ettenberg တစ်ဦးက, Bloom FE, Koob gf ။ နျူကလီးယပ်အတွက် dopamine ၏အဗဒ္ဒုန်ရွေးချယ်ကြွက်များတွင်ကင်းသော်လည်းမဘိန်းဖြူ Self-အုပ်ချုပ်ရေး attenuates accumbens ။ Psychopharmacology ။ 1984; 84: 167-173 ။ [PubMed]
67 ။ စျေး DD ။ နာကျင်မှုအာရုံခံခြင်းနှင့်အကျိုးသက်ရောက်စေအတိုင်းအတာ interrelate ကြောင်းဗဟိုအာရုံကြောယန္တရားများ။ Mol Interval ။ 2002; 2: 392-403 ။ [PubMed]
68 ။ Rassnick S က, Heinrich SC, Britton KT, Koob gf ။ အဆိုပါ amygdala ၏ဗဟိုနျူကလိယသို့ corticotropin-releasing အချက်ရန်၏ Microinjection အီသနောဆုတ်ခွာ၏ anxiogenic ကဲ့သို့သောဆိုးကျိုးများနောက်ကြောင်းပြန်။ ဦးနှောက် Res ။ 1993a; 605: 25-32 ။ [PubMed]
69 ။ Rassnick S က, Stinus L ကို, Koob gf ။ နျူကလီးယပ် accumbens နှင့်ကြွက်များတွင်အီသနော၏ပါးစပ် Self-အုပ်ချုပ်ရေးအပေါ် mesolimbic dopamine စနစ်၏ 6-hydroxydopamine ကိုတွေ့ရှိရပါသည်၏ဆိုးကျိုးများ။ ဦးနှောက် Res ။ 1993b; 623: 16-24 ။ [PubMed]
70 ။ Rimondini R ကို, Arlinde ကို C, Sommer W က, မိမိဆန္ဒအလျောက်အီသနောစားသုံးမှုအတွက် Heilig အမ် Long-တည်တံ့တိုးနှင့်အရက်ဖို့ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းထိတွေ့ပြီးနောက်ကြွက်ဦးနှောက်ထဲမှာမှတ်တမ်းစည်းမျဉ်း။ FASEB ဂျေ 2002; 16: 27-35 ။ [PubMed]
71 ။ ရောဘတ်က M, Madamba စင်ကာပူဒေါ်လာ, Stouffer DG, Parsons LH, Siggins ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်း။ အီသနော-မှီခိုကြွက်များ၏အလယ်ပိုင်း amygdala အတွက်တိုးမြှင့်ဂါဘမြို့သားလွှတ်ပေးရန်။ J ကို neuroscience ။ 2004; 24: 10159-10166 ။ [PubMed]
72 ။ ရောဘတ် AJ, Heyser CJ, Cole ကို M က, Griffin P ကို, Koob gf ။ မှီခိုနေတဲ့သမိုင်းကိုအောက်ပါအလွန်အကျွံအီသနောအရက်သောက်: allostasis ၏တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်။ Neuropsychopharmacology ။ 2000; 22: 581-594 ။ [PubMed]
73 ။ Roelofs သည် SM ။ အရက်များအတွက် Hyperventilation, စိုးရိမ်စိတ်, တဏှာ: တစ် subacute အရက်ဆုတ်ခွာ syndrome ရောဂါ။ အရက်။ 1985; 2: 501-505 ။ [PubMed]
74 ။ Roozendaal B, Castello NA, Vedana, G, Barsegyan တစ်ဦးက, McGaugh JL ။ အဆိုပါ basolateral amygdala ၏ Noradrenergic activation အရာဝတ္ထုအသိအမှတ်ပြုမှုမှတ်ဉာဏ်၏စုစည်းပြီး modulates ။ Neurobiol Mem ကိုလေ့လာပါ။ 2008a; 90: 576-579 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
75 ။ Roozendaal B, Quirarte GL, McGaugh JL ။ Glucocorticoids မှတ်ဉာဏ်စုစည်းပြီးလွှမ်းမိုးအတွက် basolateral amygdala β-adrenoceptor-Camp / Camp / PKA စနစ်ဖြင့်အပြန်အလှန်။ EUR J ကို neuroscience ။ 2002; 15: 553-560 ။ [PubMed]
76 ။ Roozendaal B, Schelling, G, McGaugh JL ။ glucocorticoid အဲဒီ receptor activation အပေါ်မှီခို: အ basolateral amygdala အတွက် Corticotropin-releasing အချက်အဆိုပါβ-adrenoceptor-Camp လမ်းကြောင်းနှင့်အတူတစ်ဦးအပြန်အလှန်မှတဆင့်မှတ်ဉာဏ်စုစည်းပြီးပိုကောင်းစေပါတယ်။ J ကို neuroscience ။ 2008b; 28: 6642-6651 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
77 ။ ရွိုင်းတစ်ဦးကနှစ်ရှိမစ္စတာပန်ဒေး SC ။ နာတာရှည်အီသနောထိတွေ့ပြီးနောက်အီသနောဆုတ်ခွာစဉ်ကကြွက်ဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံထဲမှာ neuropeptide Y ကိုပရိုတိန်း၏လျော့နည်းသွားဆယ်လူလာစကားရပ်။ အရက် Clin Exp Res ။ 2002; 26: 796-803 ။ [PubMed]
78 ။ စယ် mAh ။ မှီခိုဘာလဲ? ခုနှစ်တွင်: Edwards က, G, အယ်ဒီတာ။ မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်မူးယစ်ဆေးမှီခို။ Lexington MA: Lexington စာအုပ်များ; 1976 ။ စစ။ 182-187 ။
79 ။ Schindler CW, Panlilio LV, Goldberg က SR ။ တိရစ္ဆာန်များအတွက်မူးယစ်ဆေး Self-အုပ်ချုပ်ရေးဒုတိယအယူမှုကိုအချိန်ဇယား။ Psychopharmacology ။ 2002; 163: 327-344 ။ [PubMed]
80 ။ Schulteis, G, Ahmed က SH, Morse က AC အ, Koob gf, Everitt BJ ။ အေးစက်နှင့် opiate ဆုတ်ခွာ: အဆိုပါ amygdala မူးယစ်ဆေးစွဲကျော်လွှား၏ဝဒေနာနှင့်အတူကြားနေလှုံ့ဆော်မှုချိတ်ဆက်ထားပါတယ်။ သဘာဝ။ 2000; 405: 1013-1014 ။ [PubMed]
81 ။ Schuster CR, Thompson က T. ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးများအပေါ်အပြုအမူမှီခို။ အမ်းဗြာ Pharmacol Toxicol ။ 1969; 9: 483-502 ။ [PubMed]
82 ။ Schuster CR, ဝုဒ် JH ။ မော်ဖင်းအကိုက်အားဖြည့်နဲ့ဆက်စပ်လှုံ့ဆော်မှုများ၏အေးစက်အားဖြည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများ။ int JAddict ။ 1968; 3: 223-230 ။
83 ။ RE, Fuchs RA, Ledford CC ကို, McLaughlin ဂျေမူးယစ်ဆေးစွဲ, relapse, နှင့် amygdala ကိုကြည့်ပါ။ ခုနှစ်တွင်: Shinnick-Gallagher P ကို, Pitkanen တစ်ဦးက, Shekhar တစ်ဦးက, Cahill, L, အယ်ဒီတာများ။ ဦးနှောက် function ကိုအတွက် amygdala: အခြေခံများနှင့်လက်တွေ့ချဉ်းကပ်။ vol ။ 985 ။ နယူးယောက်: သိပ္ပံနယူးယောက်အကယ်ဒမီ; 2003 ။ စစ။ 294-307 ။ စီးရီးခေါင်းစဉ်: သိပ္ပံ၏နယူးယောက်အကယ်ဒမီ၏ရာဇဝင်။
84 ။ Shaw-Lutchman tz, Barrot M က, Wallace T က, Gilden L ကို, Zachary V ကို, Impey S က, Duman RS, မုန်တိုင်း: D, Nestler EJ ။ naltrexone-precipitated မော်ဖင်းအကိုက်ဆုတ်ခွာစဉ်ကစခန်းတုံ့ပြန်မှုဒြပ်စင်-mediated ကူးယူ၏ဒေသတွင်းနှင့်ဆယ်လူလာမြေပုံ။ J ကို neuroscience ။ 2002; 22: 3663-3672 ။ [PubMed]
85 ။ Specio SE, Wee က S, O'Dell LE, Boutrel B, Zorrilla EP, Koob gf ။ CRF1 အဲဒီ receptor ရန်ကြွက်များတွင်ဆိုးရွားလာခဲ့သည်ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေး attenuate ။ Psychopharmacology ။ 2008; 196: 473-482 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
86 ။ Sterling P ကို, Eyer ဂျေ Allostasis: arousal ရောဂါဗေဒရှင်းပြဖို့အသစ်တစ်ခုပါရာဒိုင်း။ Fisher က S နဲ့, အကြောင်းရင်း J ကို, အယ်ဒီတာများ in: ။ ဘဝစိတ်ဖိစီးမှု, သိမှတ်ခံစားမှုနှင့်ကျန်းမာရေး၏လက်စွဲစာအုပ်။ Chichester: ယော Wiley; 1988 ။ စစ။ 629-649 ။
87 ။ Stewart ကဂျေ opiate နှင့်လှုံ့ဆော်မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အမူအကျင့်ကိုသက်ဝင်သက်ရောက်မှု၏အကဲဆတ်ခြင်းဟူသောအသုံးအနှုနျးမြား၏လှုံ့ဆော်မှုကိုထိန်းချုပ်အေးစက်။ ခုနှစ်တွင်: Gormezano ငါ Wasserman EA ၏, အယ်ဒီတာများ။ သင်ယူခြင်းနှင့်မှတ်ဉာဏ်: အမူအကျင့်များနှင့်ဇီဝအလွှာဟာ။ Hillsdale NJ: Lawrence Erlbaum; 1992 ။ စစ။ 129-151 ။
88 ။ Stewart က J ကိုမူးယစ်ဆေးဝါး-ဆည်းပူးနေသည့်အပြုအမူများက de ကျေးအိပ်ချ် Reinstatement မူးယစ်ဆေးမက်လုံးပေးစိတ်ခွန်အားနိုးဂုဏ်သတ္တိများအကဲဖြတ်တဲ့နည်းလမ်းအဖြစ်။ ခုနှစ်တွင်: Bozarth MA, အယ်ဒီတာ။ နှိပ်စက်မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အားဖြည့်ဂုဏ်သတ္တိများအကဲဖြတ်ခြင်းနည်းလမ်းများ။ နယူးယောက်: Springer-Verlag; 1987 ။ စစ။ 211-227 ။
89 ။ Stewart က J ကို, Eikelboom R. မူးယစ်ဆေးဆိုးကျိုးများအေးစက်။ ခုနှစ်တွင်: Iversen LI, Iversen SD, Snyder SH, အယ်ဒီတာများ။ အမူအကျင့်ဆေးဝါးဗေဒအတွက်နယူးလမ်းညွန်။ vol ။ 19 ။ နယူးယောက်: Plenum စာနယ်ဇင်း; 1987 ။ စစ။ 1-57 ။ စီးရီးခေါင်းစဉ်: psychopharmacology ၏လက်စွဲစာအုပ်။
90 ။ Swerdlow ရော်ဘာ, Gilbert: D, Koob gf ။ ဝေဖန်အကဲဖြတ်: Spatial preference ကိုအပေါ်အေးစက်မူးယစ်ဆေးဆိုးကျိုးများ။ ခုနှစ်တွင်: Boulton AA ကို, Baker GB ကို, Greenshaw AJ, အယ်ဒီတာများ။ Psychopharmacology ။ vol ။ 13 ။ Clifton NJ: Humana စာနယ်ဇင်း; 1989 ။ စစ။ 399-446 ။ စီးရီးခေါင်းစဉ်: Neuromethods ။
91 ။ Ungless MA, Whistler JL, Malenka RC, Bonci အေလူပျိုကင်းထိတွေ့ Vivo အတွက် dopamine အာရုံခံအတွက်ရေရှည်အလားအလာဖြစ်ပေါ်သည်။ သဘာဝ။ 2001; 411: 583-387 ။ [PubMed]
92 ။ Vaccarino FJ, Bloom FE, Koob gf ။ နျူကလိယ၏ပိတ်ဆို့ကြွက်များတွင်သွေးကြောသွင်းဘိန်းဖြူဆုလာဘ် attenuates opiate receptors accumbens ။ Psychopharmacology ။ 1985; 86: 37-42 ။ [PubMed]
93 ။ Valdez ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်း, Koob gf ။ Allostasis နှင့် corticotropin-releasing အချက်နှင့် neuropeptide Y ကိုစနစ်များ dysregulation: အရက်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ဂယက်ရိုက်။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 2004; 79: 671-689 ။ [PubMed]
94 ။ ဗန် der Kooy ဃရာဌာနအေးစက်: မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏စိတ်ခွန်အားနိုးဂုဏ်သတ္တိများအကဲဖြတ်များအတွက်ရိုးရှင်းသောနှင့်ထိရောက်သောနည်းလမ်း။ ခုနှစ်တွင်: Bozarth MA, အယ်ဒီတာ။ နှိပ်စက်မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အားဖြည့်ဂုဏ်သတ္တိများအကဲဖြတ်ခြင်းနည်းလမ်းများ။ နယူးယောက်: Springer-Verlag; 1987 ။ စစ။ 229-240 ။
95 ။ Volkow ND, မုဆိုး JS, ဝမ် GJ ။ အဆိုပါစွဲလူ့ဦးနှောက်: ပုံရိပ်လေ့လာမှုများအနေဖြင့်ထိုးထွင်းသိမြင်။ J ကို Clin Invest ။ 2003; 111: 1444-1451 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
96 ။ Vorel SR, Ashby CR, Jr, ပေါလုက M, လျူက X, ဟေးယက် R ကို, Hagan JJ, Middlemiss DN, Stemp, G, Gardner EL ။ Dopamine D3 အဲဒီ receptor ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်းကြွက်များတွင်ကင်း-ရှာခြင်းနှင့်ကင်း-တိုးမြှင့်ဦးနှောက်ကိုဆုလာဘ်ဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်။ J ကို neuroscience ။ 2002; 22: 9595-9603 ။ [PubMed]
97 ။ Weiss က F, Markou တစ်ဦးက, Lorang MT, Koob gf ။ နျူကလီးယပ် accumbens အတွက် Basal extracellular dopamine အဆင့်ဆင့်န့်အသတ်-access ကို Self-အုပ်ချုပ်မှုအပြီးကိုကင်းဆုတ်ခွာစဉ်ကယုတ်လျော့နေကြသည်။ ဦးနှောက် Res ။ 1992; 593: 314-318 ။ [PubMed]
98 ။ Zimmerman JM, Rabinak, CA, McLachlan IG, Maren အက်စ်ဟာ amygdala ၏ဗဟိုနျူကလိယလေးလည်းနှင့်လွန်းနေပြီးပြီးနောက်အခြေအနေအရကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်ဖော်ပြဘို့မရှိမဖြစ်အရေးပါသည်။ Mem ကိုလေ့လာပါ။ 2007; 14: 634-644 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
99 ။ Zorrilla EP, Koob gf ။ CRF ၏ကုထုံးအလားအလာ1 စိုးရိမ်စိတ်အဘို့ရန်။ ကျွမ်းကျင်သူ Opin စုံစမ်းစစ်ဆေးမူးယစ်ဆေးဝါး။ 2004; 13: 799-828 ။ [PubMed]